सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: October 2008
आधुनिक सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको विकाससँगै विश्वीकरण -ग्लोबलाइजेसन) को गति र प्रभाव पनि बढिरहेको छ । विश्वीकरणको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तारसँगसँगै राष्ट्र-राज्यहरूको सार्वभौमिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिको गतिविधि र प्रभाव बढिरहेको छ । नेपालको पुनर्संरचना र संघीयस्वरूप निर्धारण गर्दा यो विश्वपरिदृश्य र प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राज्यभित्रका कानुनको आधार व्यक्ति, परिवार र संस्था भएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार राष्ट्र-राज्य हो । अर्थात् राज्यको कानुनले व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई चिन्छ र कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व व्यक्ति, परिवार वा संस्थाको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्र-राज्यलाई चिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि-सम्झौता पालना गर्ने दायित्व राष्ट्र-राज्यको हुन्छ । विद्रोही पक्षले मान्यता पाएको अवस्थामा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राष्ट्र-राज्यमार्फत नै राज्यभित्रका निकायसँग काम गर्छ । सारमा, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार राष्ट्र-राज्य हो । आधुनिक मानव समुदायको अस्तित्व र सार्वभौमिकता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार राष्ट्र-राज्य नै हो । तर, बीसौं शताब्दीको अन्त्यमा क्षेत्रीयता र विश्वीकरणको अवधारणाले राष्ट्र-राज्यको शक्तिलाई हाँक दिएको छ । पmान्सको पेरिसस्थित पोलिटिकल स्टडिज इन्स्िटच्युटका प्रोफेसर बट्रान्ड बाडेले राष्ट्र-राज्यको घटिरहेको सार्वभौमिक शक्तिका विषयमा विश्लेषण गरेका छन् । प्रो. बाडेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत मान्यता पाएका अहिलेका राष्ट्र-राज्यहरू पश्चिम युरोपमा तेह्रौंदेखि उन्नाइसौं शताब्दीका बीच विकसित भएका हुन् । पmान्स, स्पेन र बेलायत अस्तित्वमा आएपछि पनि त्यहाँ विभिन्नखालका राजनीतिक व्यवस्था थिए । नगर-राज्य, पोपको धार्मिक राज्य र साम्राज्यसमेत अस्तित्वमा थिए । उत्तरअमेरिकामा संयुक्तराज्य अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा विभिन्न देशको उदय भएपछि राष्ट्र-राज्यले महत्त्व पाउन थाल्यो । विस्तारै स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य अस्तित्वमा आए । त्यसपछि उपनिवेशवादको जन्म भयो । उपनिवेश युगको समाप्तिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्यलाई बल पुर्‍यायो । अहिले राष्ट्र-राज्यका अधिकार मिच्दै क्षेत्रीयता र विश्वीकरण हावी हुँदै छ । विश्वीकरण आर्थिक सिद्धान्त मात्रै होइन, यसको जरामा प्राविधिक क्रान्तिले भूमिका खेलेको छ । आधुनिक सञ्चारले भौगोलिक दूरी हटाएको छ । अहिले एउटै राज्यका नागरिकबीच मात्रै होइन, विभिन्न राज्यका नागरिकबीच अन्तर्राज्यीय सञ्चार, संवाद र सम्बन्ध बढिरहेको छ । राज्यका सीमा र ऐन-कानुन अर्थहीन हुन थालेका छन् । यसैले अब सञ्चारको शक्ति र नागरिकबीच अन्तर्राज्यीय सम्बन्धको विस्फोटलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र-राज्यका भूमिकाको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । भौतिक सीमा र दूरी राष्ट्र-राज्यहरूको निर्माण, अस्तित्व र औचित्यको महत्त्वपूर्ण आधार थियो । सयौं वर्षसम्म सरकारका मुख्य काम भौगोलिक सीमारक्षा एवं टाढा-टाढा फैलिएर बसेका नागरिकलाई सेवा-सुविधा पुर्‍याउनु थियो । सीमाको सुरक्षा र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवा-सुविधा तथा राज्यले नागरिकबाट पाउने कर, समर्थन र शक्तिका आधार यही भौगोलिक सीमा हुन्थ्यो । आधुनिक प्रविधले भौतिक सीमा र दूरी हटाएपछि राष्ट्र-राज्यका राजनीतिक व्यवस्था मात्रै होइन, सार्वभौमिक सत्ता र शक्तिमाथिसमेत संकट आउन थालेको हो । विश्वीकरणलाई सुरुमा आर्थिक क्षेत्रका निकायले उपयोग गरे पनि अहिले सबै क्षेत्रले उपयोग गरिरहेका छन् । आमनागरिकले पनि राष्ट्रका सीमा र कानुनी नियन्त्रणलाई मिचेर क्षेत्रीय सीमाभित्र वा राज्यको संगठनभित्र कारोबार, व्यवसाय गर्न सक्छन् । बजार र आर्थिक क्षेत्रका साथै अन्तर्राज्यीय सहकार्यका विभिन्न तरिका र रूप देखिँदै छन् । चित्र, चलचित्र, ध्वनिका विविध रूप र प्रकारका सामग्री सजिलैसँग आदान-प्रदान गर्न सकिने सूचना र सञ्चारको विकाससँगै जनताको सूचना र ज्ञानको बढ्दो आवश्यकताले नागरिक चासो र हित आप\_mनो देशभित्र सीमित नभएर छिमेकी वा टाढाका राज्यका घरेलु मामिलामा पनि सोझै संलग्न हुन थालेको छ । विश्वीकरणले एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यावलीमा देखापर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन तथा त्यसका लागि दबाब दिन सम्भव बनाएको छ । अब जोसुकैले आप\_mनो एजेन्डा विश्वमञ्चमा उठाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनमत तयार गर्न सक्छ । अहिले खासगरी, गैरसरकारी संस्थामा त्यो क्षमता र शक्ति बढेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय विषयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर विशाल अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक मञ्च तयार हुँदै छन् । अन्तर्राज्य प्रणालीको विकाससँगसँगै राज्यको नियन्त्रणबाहिर काम भइरहको छ । अब राज्यको भविष्य के हुन्छ ? अथवा राज्यको विद्यमान सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्न नदिने कुनै ढाँचा छ ? प्रो बाडेका विचारमा यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । किनकि, प्राविधिक विकाससँगै राज्यले काम गर्ने, आफूलाई सुधार्ने र सञ्चारलाई बलियो बनाउने उपाय पनि अपनाउन थालेका छन् । यसैले राज्यको समाप्तिको भन्दा त्यसको व्यापक परिवर्तनबारे चर्चा गर्नु बेस हुनेछ । राज्यले अरू गैरराज्यीय अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ जसबाट राज्यले आप\_mनो एउटा मुख्य चरित्र अर्थात् सार्वभौमसत्ता गुमाउँदै जानेछ । राज्य र गैरराज्यीय अन्तर्राष्ट्रिय/क्षेत्रीय शक्ति- यी दुई शक्तिबीचको सम्बन्ध नै आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य हाँक हो । राज्यको हातमा धेरै सम्पदा, स्रोत-साधन छ । त्योसँग अधिकार पनि छ । यसैले त्योसँग सम्झौता गरेर साझेदारी गर्न सजिलो छ । पछि, कसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्न सक्छ, किनकि राज्यको सबैभन्दा नजिकको शक्ति त्यही हो । तर, कुनै राज्यको स्रोत-साधनको उपयोगलाई लिएर कसैले व्यक्तिगत लगानीकर्ता, एउटा देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्ने मानिससँग वा राज्यले मान्यता नदिएका निकायसँग सम्झौता गर्न सक्दैन । आधुनिक सूचना प्रविधिले जुन अन्तर्राज्यीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सञ्जाल बनिरहेको छ, सूचनाको आदान-प्रदान भइरहेको छ, त्यो कतिपय राज्यलाई मन परेको छैन । ती राज्यले यसमा रोक लगाउन खोज्छन् । यस विषयमा विभिन्न पक्षबीच संघर्ष भइरहेको छ । यो संघर्षमा गैरराज्यपक्षले मानवअधिकार, नागरिक अधिकारजस्ता मानवीय पक्षको वकालत गर्ने हुँदा त्यसको तर्क बढी बलियोसँग सुनिन्छ । फलस्वरूप राष्ट्र-राज्यको आन्तरिक नीतिमा पनि यो पक्षको हस्तक्षेप बढिरहेको छ । राज्यहरू गृहयुद्ध र आन्तरिक द्वन्द्व, विद्रोह र दमनमा, पछिहट्नुपरेको छ र आदिवासी जनजातिका पक्षमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र दबाबको पनि भूमिका छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत राष्ट्र-राज्यको सार्वभौम शक्तिलाई चुनौती दिने सम्भवतः पहिलो प्रयास थियो । यस्ता कामले राज्यको सार्वभौमशक्तिको सीमा कति खुम्चिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । राज्यको नागरिकता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । प्रो. बाडेका अनुसार नागरिकताको अवधारणा १९ औं शताब्दीमा लोकतन्त्र र चुनावका लागि आएको हो । तर, उहिलेका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिमार्फत पहिले जति धेरै विषयको निर्णय गर्न सक्थे, अहिले सक्दैनन् । किनभने, अहिले कतिपय विषय उनीहरूले चुनेका नेता वा सरकारको निर्णय क्षेत्रभन्दा बाहिर छन् । अहिले राज्यभन्दा बाहिरको शक्तिले कतिपय निर्णय गर्छन् । जस्तै, युरोपीय देशका कतिपय कुरा देशका नागरिकले होइन, युरोपियन युनियनले गर्छ । विश्वस्तरमा विश्व व्यापार संघ, विश्वबैंकजस्ता यस्ता निणर्ायक अन्य समूह पनि छन् । यसरी क्षेत्रीय एकीकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरण गराउने शक्ति बलियो हुँदै छन् । यसैले प्रो. बाडेका विचारमा युरोपियन नागरिकताजस्तै अब नयाँ खालको नागरिकताको अवधारणा ल्याउनु जरुरी छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नीतिले विश्वका अरू देशका नीतिमा पनि प्रभाव पार्ने हुनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा विश्वकै नगरिकले भोट दिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अघिल्लो चुनावमा उठिसकेको थियो । यसपालि ओबामाले भनेका छन्, 'संसार बदल्नका लागि अमेरिकालाई बदल्नुपर्छ । अमेरिकालाई बदल्नका लागि मलाई जिताउनूस् ।' संसार बदल्नका लागि ओबामालाई जिताउने हो भने यो अमेरिकी मतदाताको मात्र सरोकारको विषय हुन सक्दैन । यस हिसाबले अब नागरिकता वा मतदाताको आधार राष्ट्र-राज्यका सीमाभन्दा माथि उठेर मानिसको हित र निकटताको आधारमा हुनुपर्छ । अर्थात् नागरिकताको आधार फेरिनु वा नयाँ हुनुपर्छ । नेपालमै पनि आप्रवासी नेपालीका लागि द्वैधनागरिकताले सहमति पाइसकेको छ । प्रो. बाडेका अनुसार नागरिकताका विभिन्न तह हुन सक्छन्- स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राज्यीय नागरिकता । यी विभिन्न तहका नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्नु अर्को हाँक हुनेछ । उप्रान्त यो विविधस्तरको नागरिकता विश्वसनीय र लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्छ । नत्र क्षेत्रीय र विश्वनागरिकता केवल प्राविधिक तन्त्र हुनेछ । नागरिकको राज्यस्तरको नागरिकता मात्रै वास्तविक हुनेछ । तर, अरू तहमा नागरिकको मत व्यक्त गर्ने अधिकार भ्रम मात्रै हुनेछ । यी विभिन्न तहका नागरिकलाई संगठित गर्नु पनि ठूलो हाँक हुनेछ । राष्ट्र-राज्य संस्कृतिमा गहिरोसँग भिजिनसकेका र विश्वीकरणको पूरा प्रभावमा नपरेका मुलुकका लागि बहुनागरिकता, राज्यको सार्वभौमिकताजस्ता विषय अपाच्य हुन सक्छन् तर ढिलो-चाँडो यी विषयबाट कुनै पनि मुलुक अलग बस्न सक्दैन । अहिले नेपालमा संघीयताको आधारको जुन अवधारणा चर्चामा आइरहेको छ, त्यो विश्वीकरण, नयाँ प्रविधि र बजारअर्थतन्त्रको अनुकूल देखिँदैन । नेपालको राज्यपुनर्संरचना र संघीयताका निम्ति यस्ता विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।(कसजू सूचना आयोगका अध्यक्ष हुन्) Binaya Kasaju
Posted by Narthunge at 6:37 AM No comments:
ज्ञानुवाकर पौडेलको देब्रे परेलाको घुँघरिएको रौँ फुलिसकेछ । शिरमाथि हिउँले लेखिदिएको छ, ज्ञानु बूढो भयो । र, उनकै शब्दमा रिटायर्ड । जीवनको गति यहीँबाट सुरु हुँदो रहेछ, जसरी उनको गति तीव्र छ । 'मध्यमस्तरका मानिसको दसैँ कस्तो पो हुन्छ र ?' उनी दसैँपछि, शान्त मुडमा, उँघिरहेको परेवाझैं, मलिला आँखा सन्काउँदै मुस्कुराउँछन् । ६१, वर्षसम्म ज्ञानुवाकर, दायाँ हातमा कालो झोला झुन्ड्याउँदै हिँडिरहे । यसरी लामो बाटो हिँडिसकेपछि, उनले आफूलाई यसरी चिनेका छन्, 'म आत्मकेन्दि्रत छु ।' जब रेडियो नेपालले ज्ञानुवाकरलाई भन्यो, 'बाइक चढ... ज्ञानु ।' मनुष्य-वाहनमा सबैभन्दा डरलाग्दो लाग्छ उनलाई, मोटरसाइकल । यस वाहनसँग ग्रहदशा त्यति मिल्दैन । सुनाएका थिए, 'म बाइक चढेर हिँडेँ भने साइनबोर्ड हेर्दा टोलाएर ठोकिन्छु ।' उनको डर यस्तै थियो । ज्ञानु, यसरी पनि डराइदिन्छन्, 'म मर्छु कि ?' उनी आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि बढी बाँच्न चाहन्छन् । मृत्युपछि, मानिस कहाँ पुग्छ ? ज्ञानुलाई लाग्छ, ऊ फेरि मानिस भएर जन्मन्छ । ज्ञानुलाई बोध छ, 'जन्मेपछि मृत्यु पक्का हो भने मृत्युपछि जन्म पनि पक्का छ ।' ओठको कुनामा फूलले अलिकति मुन्टो उठायो । पारिवारिक झमेला, सृजनात्मक प्रतिबद्धता, साहित्यिक कार्यक्रम र यायावरी सोख- उनको रिटायर्ड जीवनको मेनुमा छन् । रिटायर्ड भयो, यौटा सरकारी कर्मचारी । र, व्यस्त भयो, यौटा गजलकार । नयाँ पुस्ता, सबैका ज्ञानुदाइलाई कसैकसैले भनिदिए, गजलसम्राट् । यस पदवीले कहिलेकाहीँ ज्ञानुको अनुहार रातो बनाइदिन्छ । उनी भन्थे, 'म गजलको माली हुँ ।'
हरियो पात बन्धक सधैं रूखकोसुकेको पात हेर सफरमा रहेछ ।ज्ञानु यी हरफसम्म आइपुग्न कयौँ हरफमा अल्झिए । जीवनले लेखिदिएका, अहिले सम्झिनै नमान्ने हरफहरू । दुर्घटनापछि सडकमा कोरिएका चिह्नझैं ज्ञानुका हृदयका कुना-कुनामा कयौँ खत छन् । नमेटिने । नदेखिने । हृदयमा जमेको पीडाको कसिंगर बढार्न त नसकिँदो पो रहेछ । दायाँ हात नचाउँदै ज्ञानु सुनाउँछन्, 'सामान्य मानिस भए त बहुलाइसक्थ्यो ।' ज्ञानु केही भन्न चाहन्नन्, आफ्ना जीवनका खतबारे । जीवनसँग कुनै गुनासो र आवेग छैन । यसै गयो, उसै गयो । गौशालाचोकछेउमा गाडीका चर्का हर्नको खित्काले तर्सिएको घर छ । दिनमा पच्चीस कप चिया खपत भइदिन्छ । उनी सोच्छन्, मलाई भेट्न एकदम सजिलो छ । 'सुरुमा मलाई अद्भूत ठान्छन्,' फिस्स हाँसे, 'भेटेपछि सामान्य मान्छन् ।'जसरी सजिलै हरेक दिन उनी मृत्यु-दर्शन गर्छन् । संसारबाट बिदा हुनेहरू, उनकै घरछेउबाट जान्छन् । बसपार्कमा चिया पिइरहेको यात्रुझैं, उनी अपरिचित मानिसलाई पनि बिदा गरिदिन्छन् । मुड चल्यो, घरबाट हिँडिदियो । भारत पुगेर आँखाको डिलभन्दा पर... सम्म पसारिएको, समुद्र हेर्दै टोलायो । यही फिरन्ते शैलीबाट एउटा अंग्रेजी शब्द निफन्नियो- वाक । मन पर्ने पेय, जोनीवाकर । मन पर्ने अभिनेता पनि जोनीवाकर । र, ज्ञानु भए, ज्ञानुवाकर । अनि पो त, भारत घुम्दा कसैले बहादुर भनेर हेपेन । यसरी ज्ञानुप्रसाद पौडेल ख्यालख्यालैमा ज्ञानुवाकर भइदिए । जीवनमा यो आफ्ना लागि ज्ञानुको पहिलो निर्णय थियो । अब पालो नयाँ पुस्ताको । छोराको पहिलो निर्णय थियो- म आफ्नो नाम प्रतीक राख्छु । चिनाले दिएको नाम थियो- दिवाकर । साहित्यमा लागेर करिअर बिगारेका बाको नामको वाकर त्यहाँ झुन्डियो । छोरा आफ्ना बाबुसँग नाम जोड्न चाहन्नन्, जसरी बाबु ज्ञानु, पैसासँग आफ्नो आत्मखुसी । गजल र ज्ञानुवाकर जोडिएर आउँछन् । त्यस्तै, ज्ञानुवाकर र गाजल । अचानक जमेको महफिलमा ज्ञानु भए, त्यसको सौन्दर्य नै फेरिन्छ । जाँदाजाँदै दिल तोडी सम्झनाको रुमाल पठायौ, किन ? ज्ञानुसँग जोडिने प्रेमको चर्चाबाट उनी कहिल्यै भाग्न सक्दैनन् । भारतको कास्मिर, मिजोरम र सिक्किमबाहेक सबै प्रान्त फिरेका ज्ञानु आफूलाई अझै फिरन्ते बनाउन चाहन्छन् । भन्छन्, 'म अझै घम्न चाहन्छु ।''यति धेरै घुमेको मान्छे । स्त्रीको मनचैँ कत्तिको घुम्नुभयो ?' मैले हल्लाका दुई पाटा सम्झेँ- ज्ञानु र गाजल । 'यो त घर भाँडिने कुरा भयो,' फिस्स हाँसे र सुनाए, 'जीवन, मृत्यु र यौनबाहेक सबै कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छु ।' 'म ईश्वरवादी हुँ । कर्मकान्डी होइन ।' यस्तो भन्ने ज्ञानु, कहिलेकाहीँ पुनर्जन्ममा पनि विश्वास राख्छन् । 'पुनर्जन्म भयो भने तपाईं के हुनुहोला ?' 'म मानिस नै हुनेछु,' उनको तर्क छ । जे बीउ रोपिन्छ, त्यही त फल्छ । आलु रोपे आलु, धान रोपे धान । प्रकृतिको संविधानमा आलु रोप्यो भने भन्टा कहिल्यै फल्दैन । ज्ञानु लामो सास फेर्छन् र भन्छन्, 'मानिस मर्‍यो भने मानिस नै जन्मिन्छ ।' **बा अत्तालिएका थिए । फुच्चे ज्ञानुको बक फुटेन । आठ वर्ष नाघेको बालक यस संसारको पहिलो वाक्य, आमा, बोल्न सक्दैनथ्यो । के गर्नु ? ललितपुरको लेलेको सरस्वती मन्दिर, भक्तपुर सूर्यविनायकमा बा र आमाले सरस्वतीलाई 'चाँदीको पाउ' चढाए, प्रभु ! छोराको बक फुटाइदेऊ । यत्तिले भएन । ...अचानक ज्ञानु सूर्यविनायकको जंगलमा एक्लो भेटिए । किनभने, उनलाई छोडेर सबै लुकिदिएका थिए । डरायो भने बोल्छ कि ? भयो पनि त्यस्तै । सन्नाटाले भरिएको चिसो जंगलले मानिसको आवाज खोज्यो । र, ज्ञानु रुँदै चिच्चाए, 'बा...।'एघार वर्षसम्म उनले सुनिरहे बोलेनन् । एघार वर्षदेखि बोल्न थालेका अहिलेसम्म रोकिएका छैनन् । जसरी उनी जीवन, मृत्यु र यौनबारे बोल्छन् । 'जीवन भनेको संर्घष हो,' कम्तीमा तपाईं त यस्तो उत्तर नदिनुस्, भन्दै सोधेँ, 'जीवन के हो ?' एकछिन आफ्ना नाडी सुम्सुम्याए । सोचे, के भनूँ ? र, सुनाए, 'म जीवनलाई हिलोमा फुलेको कमलसँग दाँज्छु ।'
यौनका मामलामा सन्तुष्ट मानिसको भन्दा असन्तुष्ट मानिसको मृत्युदर बढी छ ।दिनभरि चराचुरुंगी चाराको खोजीमा रछ्यानसम्म पुग्छन् । बस्न भने रूखको टोड्का या त घरको खोपा-खोपामा बस्छन् । ज्ञानुको कुरा छ, हामी कलमजीवीका आदर्श पनि ठूला-ठूला हुन्छन् । समाजले नजा, भनेका प्रतिबन्धित ठाउँमा पनि जान्छौँ । यति भनेर ज्ञानुले फेरि गाँसे, 'मेरा भोगाइले यस्तै सिकाएको हो ।' उनको लामो कुराको सार हो- मानिस हिलोमा संघर्ष गर्दागर्दै कमलझैं फक्रिन्छ । 'मृत्यु शाश्वत सत्य हो' यस्तो उत्तर नदिनोस्, धम्याएझैं मैले सोधेँ, 'मृत्यु के हो ?' फिस्स हाँसे । अगाडिको चियाको कप उठाए र एक चुस्की लिए । यो उत्तर, पुरानो बाइरोडको बाटोबाट फनक्क घुमेर काठमान्डू आइपुग्यो, 'हामी दिनमा चार-छ-आठ घन्टा निदाउँछौँ । त्यो मृत्युको रिहर्सल हो । त्यसैले मृत्यु भनेको चिरनिद्रा हो ।''कत्तिको डराउनुहुन्छ, मृत्युदेखि ?'आफ्नो मृत्युमा दुःखी हुने नातागोता सम्भि“mदै भने, 'म साह्रै डराउँछु ।' ज्ञानुलाई कहिलेकाहीँ मृत्युको त्रासले यसरी घाँटी अँठ्याइदिन्छ, उनी 'मृत्युञ्जय' पाठ गर्छन् । अहिले उनको दिन योगाबाट सुरु हुन्छ । खानपानमा सावधान, उनका योगगुरु हुन्, रामदेव । टिभीमा रामदेव हेर्दै खुट्टा काँधमाथि राख्दा अड्किएर एकजना मानिस कराउँछन्, 'बाहिर कोही छ ? खुट्टा अड्क्यो'— वात्सायनको कार्टुन, सम्भिmएर मुसुमुसु हाँस्दै सोधेँ, 'कहिलेकाहीँ खुट्टा अड्केको छ ?'झस्किए । चियाको कप टेबुलमा राख्दै सोधे, 'कसरी थाहा भो ? त्यो रसभरी अड्केको कुरा ?' मेरो अनुहारमा अन्योलको पात उन्यूझैं उल्पलायो ।'रसभरी' सुन्नासाथै मैले कुरा मोडेँ । भन्नुस् त, रसभरी कसरी अड्कियो ? संवादको बोनस-प्रसंग यस्तो रै'छ— बाइस सालताका ज्ञानु जिल्ला अदालतमा बैदार थिए । मुखियाको तलब ६५ रुपैयाँवाला जमाना थियो । अदालतमा घुस ? त्यो पाप थियो । कसैको मुद्दा जिताउन एकजना वकिलले उनलाई घुस दिने निर्णय गरेछन् । चिया खाने निहुँमा ज्ञानुलाई मिठाई-पसल पुर्‍याइयो । अर्डर भयो, ज्ञानुको पि्रय रसभरी । ज्ञानुले सिंगै रसभरी मुखमा के राखेका थिए, वकिलले स्वाट्ट सर्टको माथिल्लो जेबमा सयको नोट राखिदिए । हे दैव ! ज्ञानुको सातो उड्यो । त्यै मौकामा रसभरी घाँटीमा अड्कियो । छेउका तिनै वकिलले निहुरिएका ज्ञानुको घाँटीमा प्याट्ट-प्याट्ट हानिदिए । आँखाबाट तरक्क, आँसु चुहिएपछि, रसभरी तल झर्‍यो । झस्किएका वकिलले यत्ति भने, 'कस्तो हो, खानै नपाएजस्तो । टुक्राटुक्रा पारेर खानुपर्छ नि !' 'यौन भनेको प्राकृतिक आवश्यकता हो,' यस्तो पनि नभन्नुहोला, ज्ञानुदाइ, मैले सोधेँ, 'यौन के हो ?''जब रेडियोको ब्याट्री सकिन्छ, कि त नयाँ ब्याट्री किनिन्छ, कि त ब्याट्री सुकाइन्छ,' ज्ञानु मौलिक मुस्कानसहित भन्छन्, 'यौन भनेकै जीवनको रिचार्ज हो ।'धेरै ठाउँमा पढेको र भोगेको ज्ञानुको यौन-व्याख्या छ- यौन-दमनले अप्राकृतिक घटना घट्छन् । जो जीवनमा यौनका मामलामा सन्तुष्ट छन्, ती दीर्घायु, तनावमुक्त र स्वस्थ हुन्छन् । 'अनि नहुनेहरू नि ?''यौनमा पाखन्ड र बेइमानी हुनु हुँदैन,' भन्दै मुसुमुसु हाँस्छन् । र, उत्तर घुमाउरो पाराले दिन्छन्, 'यौनका मामलामा सन्तुष्ट मानिसको भन्दा असन्तुष्ट मानिसको मृत्युदर बढी छ ।'राममनोहर लोहियालेझैं उनी भन्छन्, 'यदि आपसी सम्झौतामा इमानदारी छ भने सबै सम्बन्ध नैतिक छन् ।'प्रश्नको फेरो द्रौपदीको साडीझैं लम्बिँदै गएपछि, यसो आङ तन्काउँदै ज्ञानुले म बबुरोलाई सम्झाए, 'हाम्रो समाज धर्मभीरु छ । यस विषयमा चर्चा गर्नु जायज नहोला ।'कुरा त उही हो- अपने हमाम मे सब नंगे है ।**एक जीवनमा एक मानिस अनेक मानिस भएर बाँच्छ । ज्ञानु पनि अनेक मानिस बोकेका एक मानिस भएछन् । 'थाहा छ ? मैले कहिल्यै जागिरका लागि निवेदन हालिनँ,' मुसुक्क हाँस्छन् । निवेदनको जिम्मा त दाइ र बाले पो लिएका थिए । धेरै ढिलो बक फुटेको छोरो हेर्दाहेर्दै कविता पो गुन्गुनाउन थाल्यो, दैव ! ज्ञानु अर्थात् बैदार । बाइस सालमा अस्थायी जागिरे । स्थायी आयो । त्यो पनि सक्कियो । पच्चीस सालमा, ज्ञानु अर्थात् सप्लायर्स । दरभंगामा कपालको तेल बेच्न यी फिरन्ते, जनकपुर-जयनगर-कमतौल-बैरगनियातिर झुल्किन्थे । सक्कलीको डुप्लिकेट सुगन्धित तेलका नाम हुन्थे : पमानी, कोलगेट, ब्रम्मी । यसरी छोरो तेल बेच्दै कहाँ-कहाँ पुगेन ? बालाई झोक चल्यो- यल्लाई त तह नलगाई भएन । अनि ज्ञानु, पच्चीस सालमै पुगे, आर्मी हेडक्वार्टर । ज्ञानु अर्थात्- सार्जेन्ट कल्र्क । अब ज्ञानुलाई लाग्न थाल्यो, कहाँ फसियो यार ! ज्ञानुको मन पिँजराको सुगाझैं, घाइते, फड्फडाउन थाल्यो । आरआर कलेजका आर्टस्का विद्यार्थी ज्ञानुले पढाइ र कामलाई म्यानेज गर्न सकेनन् । कर्नेलले सहयोग गरेनन् । कर्नेल सा'प, बरु झोक्किए । तेत्तीस सालमा ज्ञानु उन्मुक्त भए । ज्ञानु अर्थात् स्टोर सुपरिन्टेन्डेन्ट । मुक्त मनको चरी सोल्टी होटलमा रमेन । त्यसपछि, ज्ञानु अरू भएर पनि बाँचे । उमेरले जीवनको साँचो उनकै हातमा सुम्पिदियो । अंशबन्डा छुट्याइदिएको बूढो बाबुलेझैं भन्यो- ज्ञानु ! अब जे गर्नु छ गर् ।बल्ल, ज्ञानु अर्थात् सम्पादक । पैंतालीसदेखि गरिमा पत्रिकाको कुर्सीमा लामो थकानपछि उनी सुस्ताए । साहित्यका कुरा खुब भए । ज्ञानु अर्थात् सरकारी जीव । रेडियो नेपालको मध्यम अँध्यारो कोठामा ज्ञानुका धेरै वर्ष आए र गए । वर्षहरू बाटो बिर्सिएको यात्रीझैं बाटो सोध्थे र जान्थे । र, त्रिसठ्ठी सालको एकदिन ज्ञानु घर फर्किए, बिहान उठ्दा उनी कुनै सरकारी जीव थिएनन् । एउटा पूर्ण मानिस थिए । ज्ञानु अर्थात् ज्ञानुवाकर पौडेल । फनक्क पृथ्वी एक फन्को लगाएको घाम पहेँलिँदै डाडाको टुप्पामा पुगिसकेको छ । घाम भन्छ- घाटघाटको पानी पिए ।गजलको कुरा गरी साध्य छैन । झन्, गाजलको कुरा । कसैले भनिदिन्छ, प्रेमिकाका आँखाको गाजल हो, गजल । अनि गजलकार ? ज्ञानु फिस्स हाँस्छन् । चवालीस सालमा ...अचानक विवाहित नेपाली पुरुष भएका ज्ञानु, भन्छन्, 'म प्रेमको मामलामा अभागी छु ।' लामो असफल-प्रेम-व्याख्यानको सार त यही उखानले भनिदिएपछि, लामो कुरा किन चाहियो, ज्ञानुदाइ- सुन नला'कीलाई मैले पत्याइनँ, सुन ला'कीले मलाई पत्याइन । 'अतृप्त प्रेमको तिर्खा मेटियो कि मेटिएन ?''मेरी श्रीमतीको प्रेमले... प्रेमको मामलामा जुन वितृष्णा थियो, त्यो पखाल्यो,' अल्लि माथि निधार उचाल्दै, आँखा जुधाउँदै सुनाए, 'नारीप्रति मेरो जुन नकारात्मक भावना थियो, श्रीमतीका कारणले केही हदमा सकारात्मक बनायो ।' 'केही हदमा मात्रै ?' पूर्ण त को हुन्छ र ? उनले प्रश्न सुनेनन् । या त नसुनेजस्तो गरे । कुन्नि के हो ? 'म भाग्यमा गर्व गर्छु,' यस्तो भने, 'अनुकूल श्रीमती पाएकामा ।' ढिलो बक फुटेका ज्ञानु ढिलो सात कक्षाको रोलक्रममा सामेल भए । एकैचोटि सात कक्षा ? के पास हुनुभयो ?'भएँ त ।' ज्ञानुलाई लाग्छ, जीवनमा जे-जे भयो, त्यो सबै हुनलाई नै भयो । पछुतो पनि छैन, जीवनमा, कहाँ-कहाँ बिराइस्, ज्ञानु ? रेडियो नेपालका उपनिर्देशक दौलतविक्रम बिष्टलाई गोडा कमाउँदै, ठूलो फ्यान भएर भेट्न पुगेका ज्ञानुको उमेर, त्यही कुर्सीमा अलिकति झोक्रायो । महत्त्वाकांक्षाले कहिल्यै घुँडा टेकाएन । उमेरमा घरबाट भागेर तीन महिना फराकिला समुद्रका किनारमा टोलाउँदै बस्ने यी ज्ञानुको यात्रा अझै थपिएको छैन । सारा नेपालमा उनको पदछाप, खोज्नुपर्छ, भेटिन्छ । भन्छन्, 'तीन जिल्ला पुगेको छैन, एकदिन पुग्छु ।'साथीहरूको कुरा गरिसाध्य छैन, कहाँ-कहाँ पुगेका छैनन् । बायोडाटा हेर्ने हो भने संसार घुमिसकेका छन् । ज्ञानुलाई झोक चल्यो । म किन विदेश जान नहुने ? उनले सोचे- मेरो बायोडाटामा विदेश थप्छु । 'म खासा गएँ,' हाँस्दै भन्छन्, 'मेरो बायोडाटामा चीन थपियो ।''बायोडाटामा थप्न मन लागेका देश कुन-कुन छन् त ?''आइसल्यान्ड, गि्रनल्यान्ड र चेकोस्लोभाकिया,' अनुहारको रौनकै अर्को, 'यी देशका बारेमा किताबमा पढेको छु । नीला समुद्र छन्, पिँधसम्म देखिने ।'आफूभन्दा कम उमेरका मानिस सचिव छन् । गाडी छन् । घर छन् । बैंक ब्यालेन्स छ । ज्ञानुको मन कुटकुटु टोक्ने धमिराजस्ता यी प्रश्नहरूको कुनै उत्तर छैन । उत्तर ज्ञानुसँगै छ, 'मलाई पछुतो छैन । मेरो जीवन उपलब्धिमूलक हो कि होइन, त्यो मेरा मलामीको संख्याले देखाउनेछ ।''म हरेक हिसाबले सार्थक छु,' जीवनको जोड-घटाउ हो, 'समाजमा मेरो पहिचान छ ।''अनि घरमा ?''साहित्यमा लागेर करिअर बिगार्‍यो भन्छन्,' मुसुक्क हाँसे, 'कहिलेकाहीँ पुरस्कार पाउँदा खुसी पनि हुन्छन् ।' कात्रोमा गोजी हुँदैन हेरबिक्रीमा किन इमान राख्नू ।मन्दिर होस् गाउँबाहिरैबस्तीभित्र चिहान राख्नू ।'हर्ष न बिस्मात् । सुखदुःख बराबर,' ज्ञानुको जीवनको सार यही हो । हुन पनि, ज्ञानु स्त्रीको गाजलबाट जीवनको गाजलसम्म उक्लिसकेका छन् । जीवनको गाजल लाउन जाने अझ सुन्दर, लाउन नजाउने झन्, कुरूप । बुद्धिसागर buddhisagar@gmail.com
Posted by Narthunge at 6:30 AM No comments:
सानै कामका लागि पनि घरबाहिर जानुपर्‍यो भने साथी नभई हुन्न । उनका दुवै खुट्टाले आफ्नो काम गर्न सक्दैन । खुट्टाले आफ्नो काम गर्न नसक्ने भएपछि घसि्रने गरेका छन् । 'यी हेर्नुस् न म मज्जाले घसि्रएर हिँड्न सक्छु, बसेको ठाउँभन्दा अलि पर रहेको चुरोटको बट्टा ल्याएर देखाए,' शारीरिक रूपमा अशक्त छन् विजय बजिमय । तर, उनी आफूलाई अशक्त महसुस गर्दैनन् । 'खुट्टाले काम नगरेर के भो त मेरो मन कमजोर छैन, मन बलियो भएसम्म केही फरक पर्दैन,' उनले आफू फूर्तिलो रहेको आभास दिलाउन खोजे । कुराकानी सुरु हुनै लाग्दा साहित्यकार नयनराज पाण्डे आइपगे साझा प्रकाशनमा हुन गइरहेको चुनावका विषयमा केही सल्लाह गर्न । 'भोलि हामी थप कुराकानी गरौंला' भन्दै पाण्डेलाई चिनीबिनाको एक कप कफी खुवाएर बिदा गरे । र, आफ्नै विगत कोट्याउनतिर लागे । आफ्नो शारीरिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भने, 'जन्मँदै हड्डी कमजोर भएको रहेछ, पहिला अहिले जस्तो औषधि थिएन, हड्डी बलियो बनाउन भन्दै आमाले माछाको तेल खुवाउनुहुन्थ्यो ।' तर, यी जन्मजात हिँड्न नसक्ने भने होइन रहेछन्, '१२ वर्षसम्म त हिँड्न पनि सक्थेँ, ७ कक्षासम्म त गण्डकी बोडिङ स्कुल पढेको थिएँ, हिँडेरै स्कुल पुग्थेँ ।'
दुवै खुट्टा चल्दैनन् विजय बजिमयका । तर, नारायणगोपालसँग फुटबल खेलेको अनुभव सुनाउँछन् । '१२ वर्षसम्म त हिँडेर स्कुल गएँ, बिस्केट जात्रा हेर्न जाँदा मातेको घोडाले हानेपछि कमजोर खुट्टा भाँचियो ।’'जो होचो उसकै मुखमा घोचो' भनेजस्तै बाह्र वर्ष पुग्दा यिनको जीवनमा एउटा आइपरेछ । विपत्तिका शृंखला सुरु गरे, 'मेरो घर पोखरा, नजिकै बिस्केट जात्रा लाग्थ्यो । भक्तपुरमा जस्तै । म पनि अरू साथीसँगै बिस्केट जात्रा हेर्न गएँ ।' जात्रामा भीडभाड त हुने नै भयो । जात्राकै लागि लगेको एउटा घोडा मातेको रै'छ, जोसुकैले तह लगाउन नसक्ने । विजय सुनाउँछन्, 'म जात्रा हेरिरहेको थिएँ, मातेको घोडा आयो र मान्छे हान्न थाल्यो, अरू त बलिया थिए भागे, म अरूजस्तै कुद्न सक्दैनथेँ, त्यो घोडाको तारो मै भएँ, मलाई हान्यो अनि खुट्टा भाँचियो ।' उसै त कमजोर खुट्टा, भाँचिएपछि उपचार सम्भव भएन । मातेको घोडाले हानेर हिँड्डुल गर्न नसक्ने भएपछि स्कुल जाने प्रसंग त्यहीँ पूर्णबिराम लाग्यो । तर, अक्षर मज्जैले चिनेका कारण पुस्तक र पत्रिका पढ्न समस्या भएन, स्कुल जान बन्द भएपछि बाँकी समय भएका पुस्तक र पत्रपत्रिका पढेरै बित्यो । घरमा भएका पुस्तक केही दिनमा पढिसकेपछि थप पुस्तक किनिदिन घरका मान्छेलाई आग्रह गर्न थाले । घरका मान्छेले पनि उनका कुरामा सतप्रतिशत समर्थन जनाउँदै इच्छाइएका पुस्तक ल्याइदिन थाले । पछि त उनको घरमा पुस्तकको चाङ यति धेरै भयो, सानोतिनो पुस्तकालयजस्तै देखियो । त्यसपछि त विजयदाइको जोस बढिहाल्यो । पुस्तकालयको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले टोलकै साथीहरूसँग मिलेर आफ्नै घरमा पुस्तकालय खोले- 'हाम्रो पुस्तकालय' ।विजयदाइ साहित्यमा समर्पित स्रष्टाका रूपमा चिनिन्छन्, औपचारिक रूपमा साहित्यिक माहोलमा भिज्ने अवसर पनि यही पुस्तकालयले मिलाइदिएको हो भन्ने लागेको छ उनलाई । घरमै किताबखाना खोलेपछि उनको संगत साहित्यसँग चासो राख्नेकै सेरोफेरोमा हुन थाल्यो । त्यसक्रममा साहित्य र संगीतका केही महत्त्वपूर्ण हस्तीसँग भेट भएको सुनाए । अहिले यिनका दुवै खुट्टा काम नलाग्ने अवस्थामा छ । तर, नारायणगोपालसँग फुटबल खलेको बिर्सेका छैनन, 'कतिले पत्याउँदैनन्, मैले त नारायणगोपालसँग फुटबल खेलेको छु । कौसीमा बसेर चंगा पनि उडाएँ ।' खुट्टै नभएका यिनले कसरी खेले फुटबल ? प्रसंग रहेछ, नारायणगोपालको बिहेको । नारायणगोपालले पेमला गुरुवाचार्यसँग प्रेम-विवाह गरे । त्यो कुरा काडमाडौंको नेवार खान्दानलाई पाच्य भएन र श्रीमतीलाई घरमा भित्र्याउने अनुमति नपाएको झोंकमा उनी श्रीमती पेमलालाई लिएर लागे पोखरा । आपत्मा परेका सहकर्मीका सहयोगीका रूपमा चिनिन्थे कवि भूपी शेरचन । केही दिन नारायणगोपालको दम्पती भूपीकै घरमा पाहुना बनेर बसे । नारायणगोपाललाई पनि पोखरा मन पर्‍यो । भूपीले अर्को उपाय खोजे, दुवैलाई पोखरामै राख्ने व्यवस्था गर्ने । भूपीकै प्रयासमा नारायणगोपाल अमरसिंह स्कुलमा मास्टर भए भने पेमलाले कन्या स्कुलमा पढाउन थालिन् । जतिबेला विजय विद्यार्थी थिए, त्यो समय उनीलगायत उनका साथीहरू हरेक बिहान-बेलुका भूपीको आँगनमा पुग्थे, किनकि भूपीको आँगन ठूलो थियो र मज्जाले फुटबल खेल्न पाइन्थ्यो । त्यसमा साथ दिन्थे- नारायणगोपालले । फुटबलको प्रसंग रोकियो, सुरु गरे- साहित्यिक कर्मको । घरमा पुस्तकालय खोलेपछि आफ्नै प्रयासमा साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेदेखि विभिन्न बुलेटिन सम्पादनको काम गर्न थाले विजयदाइ । पोखरेली साहित्यवृत्तमा मज्जैको परिचय बनाए । उनलाई भेट्न आउनेहरूसमेत बढ्न थाले । त्यही समयमा यिनको भेट भयो- टीकादत्त पन्तसँग । जो पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको हाकिम भएर गएका थिए । पन्तले विजयदाइलाई भेटेर भने, 'तपाइर्ं साहित्यमा रुचि भएको मान्छे औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा प्रेस राख्नुस्, म तपाईंलाई सहयोग गर्छु ।'पन्तको कुरा मज्जा लाग्यो र प्रेसको काम गर्न थाले । तर, परिणाम सुल्टो भएन । 'किताब छापेर आम्दानी गर्नु त कता हो कता, खर्च धान्न सम्भव भएन,' अर्को यथार्थ सुनाए । प्रेसको कामबाट उपलब्धि हात नलागेपछि केही समय जग्गाको काम पनि गरे त्यसबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् यिनी । लगानीको प्रतिफल नआएपछि यिनलाई पनि लाग्न थाल्यो, 'नयाँ ठाउँमा बसेर नयाँ काम गर्नुपर्छ ।' पोखरामै जन्मेर हुर्केका यी कविले पनि करिअर बनाउने थलो काठमाडांैलाई नै देखे । भन्छन्, 'काडमाडौंमा गएपछि केही हुन्छ कि भन्ने लाग्यो ।' आफ्ना झिटीगुन्टा बोकेर लागे काठमाडौंतिर । काडमाडौं आएपछि भने यिनको दैनिकीमा केही परिवर्तन आयो । पोखरामा हुँदा हरेक हिन्दी फिल्म नहेरी हुन्नथ्यो । भरसक पहिलो शो हेर्नमै हलमा पुग्थे । पोखराका पूणिर्मा र कल्पना हल पि्रय लाग्थे । नयाँ फिल्म आएको थाहा पाएपछि हलमा फोन दबाइहाल्थे, 'म फिल्म हेर्न आउँदैछु, एउटा टिकट राखिदिनू ।' प्रशस्त फिल्म हेरेका विजयदाइ राजेश खन्ना, जितेन्द्र, रजनी कान्त र राज बब्बरका असली फ्यान रहेछन् । हिरोइनमा रेखाको अभिनयबाट प्रभावित भएको कुरा सुनाए । तर, काडमाडौंले यिनको फिल्मीमोह घटाइदिएछ । अहिले फिल्म हेर्न मन लाग्दैन ? 'लाग्दैन, हलमा नगएको त जुग भइसक्यो, टिभीमा पनि समाचार मात्रै हेर्छु,' उनले भने । साहित्यको अतिरिक्त पत्रकारितामा समेत यिनले केही वर्ष काम गरेका छन् । राष्ट्र पुकार, मातृभूमि, समीक्षालगायतका पत्रिकाको सम्वाददाता भएका विजय बजिमयले पत्रिकाको कर्मबाट आर्थिक उपलब्धि महसुस गर्न सकेनन् । तर, केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग भेटघाटलाई पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् यिनले । बिपी कोइरालाको नीतिसँग सार्‍है प्रभावित रहेछन् यी साहित्यकार । भन्छन्, 'म उहाँको शैलीबाट सार्‍है प्रभावित छु ।' ०३४ सालमा बिपीलाई भेट्दाको प्रसंग सुनाए, 'गणेशराज शर्माको ज्याक लगाएर बिपीलाई भेट्न चाबहिल गएँ, २० जनाजति मभन्दा पहिल्यै गइसकेका रहेछन् । म पनि कुर्नेकै हारमा बसेँ ।' उनलाई लागेको थियो, २० जनापछि आफ्नो पालो आउँछ । बिपीले त सरासर आएर सोधेछन्, 'तिमी विजय होइन ।' केही क्षणको भलाकुसारीपछि बिपीले भनेछन्- 'म तिमीलाई एउटा थिम सुनाउँछु तिमीले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।' बिपीको थिम सुनेर प्रतिक्रिया दिए, 'यो त नेपाली समाजमा अलि अपाच्य हुन्छ कि ? सुनेपछि बिपीले भनेछन्, 'हामी क्रान्ति गर्ने मान्छे हौं, त्यस्ता कुरामा डराउनुहुन्न, यो म लेखेरै छाड्छु ।' त्यो थिम कस्तो थियो ? विजयले भने, 'मलाई बिपीले बाबुआमा र छोरा शीर्षकको कथा सुनाउनुभएको थियो ।'यिनको फुर्सदको समय टेलिभिजनको समाचार हेरेर र लेखपढ गरेरै बित्छ । अन्य कामका लागि आफ्ना केही सहयोगी राखेका छन् । बिहे गरेको भए जिउन अझै सजिलो पो हुन्थ्यो कि ? सुरुमा बिहे गर्ने मन भएको पछि मन बदलिएको कुरा गरे, '२८/३० वर्षको हुँदासम्म बिहे गर्न मन थियो । त्यो बेला जिम्मेवारी पनि कम थिएन । तीनवटी बहिनीको बिहे गरेपछि आफ्नो बिहे गरौंला भनेर सोचें तर, पछि मन फेरियो ।' जिम्मेवारी पूरा गरिसक्दा बिहेको प्रसंग मनबाट हटेको कुरा गरे ।ध्रुव लम्सालgal_dhuji@yahoo.com
Posted by Narthunge at 6:29 AM No comments:
Posted by Narthunge at 6:14 AM No comments:
Posted by Narthunge at 6:07 AM No comments:
सहकारीका प्रवर्तक रोबर्ट ओवेनको समाजवादी आन्दोलन
बेलायतको वेल्स राज्यमा सन् १७७१ मा जन्मेका रोबर्ट ओवेन मानव सभ्यताको इतिहासमा प्रख्यात समाज सुधारक, समाजवादी विचारक तथा आधुनिक सहकारी आन्दोलनका पिताको रूपमा प्रख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । आफ्नो ८७ वर्षको जीवनकालमा उनले मानव सभ्यताको विकासमा ठूलो देन दिएका छन् । औद्योगिक क्रान्तिपछिको विश्वको पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली, बजार प्रणाली आर्थिक असमानता र शोषणको जगजगी चलेर मानव समाज वर्गीय द्वन्द्वमा फसेको अवस्थामा रोबर्ट ओवेेनका विचार र उनका क्रियाकलाप दुनियााले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न लायक थिए । तब असल व्यापारी र असल मालिक सफलतापूर्वर्क बन्न सकिन्छ जब आफ्ना कारखानामा काम गर्ने श्रमिकहरूको भलाइका काम गरिन्छ भन्ने उनको विचार थियो । उनी मानव समाज पूाजीको प्रतिस्पर्धामा अन्धो हुनु हुादैन, आपसमा मिलेर एकार्काको सहयोगी भएर सबैले समान र आत्सम्मानको जीवन बााच्न सक्ने वातावरण रहेमा मात्र मानवको उत्कृष्टता कायम हुन सक्छ भन्ने उनको विचार र यसै अनुरुपका उनका क्रियाकलाप नै आधुनिक सहकारी आन्दोलनका पृष्ठभूमि बन्न पुगे । त्यसकारण रोबर्ट ओवेनलाई सहकारी आन्दोलनका पिता भनेर चिनिन्छ ।
रोबर्ट ओवेन स्कटल्यान्डको एउटा कटन मिलका मालिक बन्न पुगे । उनले आफ्ना मिलमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि प्रशस्त सुविधा दिएका थिए । महिला र केटाकेटीलाई श्रमबाट मुक्त गरेर केटाकेटीका लागि स्कुल र महिलाको लागि उपयुक्त कामको व्यवस्था गरेर आफ्नो कारखानालाई विशेष प्रकारले सञ्चालन गरेका थिए । उनको कारखानामा कहिल्यै हड्ताल भएन । मिसिन, उपकरण, वातावरण र मानवीय संयन्त्र तथा प्रशासन सधैा स्वस्थ, तन्दुरुस्त र अपडेटेड भइरहन्थ्यो । अवलोकन गर्न आउने ठूला व्यापारी र पूाजीपतिहरू छक्क पर्दथे । उनको कारखाना पmान्स र युरोपका विभिन्न देशका व्यापारी, उद्योगपतिहरूका लागि अवलोकन स्थल बनेको थियो । उनले सफल उद्योगपतिको रूपमा प्रख्याति कमाएका थिए ।
रोबर्ट ओवेनले समाजलाई न्यायपूर्ण, शोषणरहित, एकार्कामा सहयोगी, ऐक्यबद्ध समुदाय बनाउन धेरै प्रयत्न गरे । नाफा कमाउने, कार्यलाई उनी राम्रो काम मान्दैनथे । मुनाफा कमाउनु ठगी गर्नु हो भन्ने उनको विचार थियो । रोबर्टले उपयुक्त सामाजिक अवस्थाका लागि एकार्कामा सहकार्यको अवस्था चाहिन्छ भनेर बेलायती सरकारलाई सहकार्य ग्राम बनाउन आग्रह गरे । उनको योजना अनुसार यस्ता आवास ग्रामहरू औद्योगिक र कृषि दुवै क्रियाकलाप गर्न सकिने गरी स्थापित गर्नुपर्ने थियो । उनको योजना सफल हुने उनको विश्वास थियो । त्यसकारण उनले अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा नयाा सुन्दर समुदाय सन् १९२५ मा स्थापना गराए ।
बेलायतमा स्थापना गरेका सहकार्यको आवास ग्राम र अमेरिकामा स्थापना गरेका नयाा सुन्दर समुदायमा सबैलाई अवसर र आपसमा सहयोग सामूहिक स्वामित्वका आर्थिक कार्यक्रम, खुल्ला र पारदर्शी व्यवहार, सबैलाई शिक्षा, तालिम, सूचना आदिको संस्थागत व्यवस्था हुनपर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्थाको लागि यी बस्तीहरू खास गरी बेरोजगार र श्रमिकहरूका सामूहिक बस्ती थिए ।
रोबर्ट ओवेनको विचार र शिक्षाबाट समाजमा ठूलो प्रभाव परेको थियो । आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, चर्को मूल्यलगायत विभिन्न प्रकारका सामाजिक समस्यामा पीडित त्यस बेलाको समाजमा तत्कालीन स्विस शिक्षाविद् जोहन पेस्टालोजी प्रभावित भएका थिए । उनले ओवेनका विचारहरूलाई गहिरोसाग अध्ययन गरेर सहकारीको विस्तारमा मद्दत गरेका थिए । ओवेन पुस्तकलाई महìवका साथ अध्ययन गर्नु पर्दछ र बालबच्चालाई पनि सिकाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्थे । बालबच्चालाई असल शिक्षा दिनुपर्दछ र यस्ता कुराहरूको उपयुक्त उदाहरण वरिपरिका कुराहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । रोबर्ट ओवेन एउटा समाज सुधारक मात्र नभएर शिक्षाका प्रणेता पनि मानिन्छन् । त्यस समयमा उनले पाउनु पर्ने जति सम्मान पाउन सकेनन् किनभने उनी ढोागी धार्मिक कुराको विरोधी भएकाले क्रिश्चियन समाजले उनलाई सहयोग गरेन । धर्म विरोधी विचारक भएकोले कतिपय सङ्गठित मानिसहरूले उनीसाग काम नै गर्न छोडी दिए । यी स्वार्थी र धर्मअन्ध मानिसहरूका कारण उनको समुदायमा कतिपय मानिसले काम गरेनन् र उनको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । फलस्वरूप ओवेन अमेरिकाबाट असफल भएर बेलायत फर्किनु पर्‍यो ।
बेलायत फर्केपछि ओवेनले व्यवसायबाट अलग रहेर सम्पूर्णरूपले आफ्नो सामाजिक सिद्धान्तप्रति समर्पित भएर काम गर्न थाले । सन् १८२८ देखि उनी लन्डनमा बस्न थाले । लन्डनमा रहेका ट्रेड युनियनहरू उनका सहकार्य ग्रामका लागि सहयोगी बन्न थाले । सन् १८३३ मा ओवेनले ग्रायन्ड नेसनल कन्सोलिडेटेड ट्रेड युनियन स्थापना गरे । जसमा पााच लाख कामदार सदस्य रहेका थिए । यो अभियानबाट कारखानालाई सहकारीको रूपमा पुनरसंरचना गर्ने प्रयत्न गर्न थाल्नु भयो । सरकार र उद्योगपतिहरूले उनको अभियानको विरोध गरे । सन् १९३४ सम्ममा उनको ट्रेड युनियन विघटन भयो । ओवेन निराश नभइकन सकारले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत उठाई रहे । यद्यपि उनको योजना स्वीकार गरिएन । उनका विचारहरू पछि स्थापित हुने सहकारीहरूले आत्मसाथ गरे । वेल्सको न्यु टाउनमा जन्मेका रोबर्ट ओवेन ९ वर्ष उमेरमा स्कुलको पढाइ छोडेर कटन मिलमा काम गर्न थालेका थिए । ९ वर्षको उमेरमा श्रमिक भएर कारखानामा काम गर्ने एउटा मजदुर आफ्नो प्रतिभा र मानवीय भावनाका कारण आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्गठन सहकारी आन्दोलनका पिता हुन पुगे । रोबर्ट आवेनको प्रभावकारी र प्रेरणादायी विचारहरूको शृङ्खलामा आधारित चलचित्र प्रख्यात चलचित्रको रूपमा चर्चित छ ।
रोबर्ट ओवेन समाज सुधारक, समाजवादी विचार र सहकारी आन्दोलनका प्रवर्तक हुन् । शोषणरहित, सभ्य, सुन्दर, शान्त मानव समाजको लागि ओवेनले अनेकन प्रयास, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग जीवनभर गरिरहे । तत्कालीन समयमा उनी र उनका सहयोगीहरूको विचारको व्यापक प्रभाव पर्‍यो । ओवेनको समयपछि अन्य विचारकहरूले सामजवादी सिद्धान्त र सहकारी सिद्धान्तको व्यापक विकास गरे । द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन तथा वैज्ञानिक समाजवादका दार्शनिक सिद्धान्तकार कार्ल माक्र्सले रोबर्ट ओवेनको समाजवादलाई आदर्शवादी र काल्पनिक समाजवाद भनि निम्न तीनवटा बुादामा विश्लेषण गरेका छन्-
प्रथम ओवेनको सङ्कल्प र कार्य उहााको आप\_mनै स्वतन्त्र प्रकारको भएकोले यसमा जिम्मेवार कोही छैन । जनता परिस्थितिका उपज हुन्छन् यद्यपि शिक्षा, श्रम सुधार सम्बन्धीका कामले ओवेनलाई मानवीय मूल्यका पायोनियर्स बनाएको छ ।
दोस्रो सबै धार्मिक मान्यताहरू वाइयात कल्पनामा आधारित हुन्छन् जसले मानिसलाई कमजोर, अनौपचारिक हिसाबले अति मूर्ख प्राणी, कट्टर अन्धभक्त, निराशापूर्ण र वहानावाजीकर्ता बनाउाछ । त्यसैले ओवेनले धार्मिक कट्टरताको विरोध गरे तथापि बूढेसकालमा धर्मप्रतिको आस्था दर्शाए ।
तेस्रो रोबर्ट ओवेनले ठूला औद्योगिक प्रणालीको सट्टामा साना अद्योग तथा घरेलु प्रणालीमा जोड दिए ।
कालान्तरमा विश्वमा पूँजीवादी खेमा र समाजवादी खेमाबीचको ध्रुवीरण तीव्र रूपमा बढ्यो । यसले युद्ध र सीतयुद्धको अवस्थाबाट विश्वका सबै राष्ट्रहरू प्रभावित हुन पुगे । दुई विपरित चरित्रका राजनीतिक-आर्थिक प्रणालीलाई समन्वय गर्ने तेस्रो आर्थिक प्रणालीको रूपमा सहकारी आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा लोकपि्रय बन्यो । विश्वव्यापी बनेको सहकारी आन्दोलन पारदर्शी, समावेशी, दिगो र मानवीय व्यवहारको सत्यतामा आधारित समाज विकासको दर्शनको रूपमा स्थापित हुादै आयो । आधुनिक सहकारीको सुरुआतको कालमा कुनै धार्मिक विचारधारा विशेषको दायरामा यसलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न भए । पछिल्लो कालसम्म कुनै राजनीतिक वाद वा दर्शन विशेषको रूपमा व्याख्या पर्ने प्रयत्न पनि भएको देखिन्छ । विविध चिन्तन र विविध मान्यतामा रहेको मानव समाजमा आ-आप\_mनो ढङ्गले कुनै घटना-परिघटनालाई हेर्नु अश्वाभाविक होइन । मानव विकास क्रमको लामो इतिहासमा सत्य एवं व्यवहारमा आधारित मान्यता स्थापित हुादै जान्छन्, विकास हुादै जान्छन् । अव्यावहारिक तथा सत्यरहित मान्यताहरू कुनै बलद्वारा जबर्जस्ती स्थापित गराउने प्रयत्न गरिए तापनि क्षणिक अस्तित्वमा मात्र रहन्छन् ।
आधुनिक समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थसशस्त्रलगायत मानवीय गतिविधिका सबै विधामा मानिसको चेतनाले आर्जन गरेका वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा मानवीय व्यवहारअनुसार समाज विकासको आधुनिक सिद्धान्तको रूपमा सहकारी सिद्धान्त व्यवहारजन्य सत्यताको आधारमा विकास भएको छ । यसको उपयोग आ-आप\_mना राष्ट्र विशेषको परिप्रेक्षमा कसरी गर्ने हो, सोही आधारमा राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक विकास हुने कुरा विभिन्न मुलुकका उदाहरणहरूबाट सिक्न सकिन्छ । सत्य विश्वव्यापी हुन्छ । यसै प्रकाशमा सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहार आधारभूत रूपमा विश्वमा एउटै प्रकारको रहेको छ । विविधतापूर्ण विश्व मानव समाजमा यो एउटा चाखलाग्दो विषय हो । परिवर्तनपछिको गणतान्त्रिक सरकारले आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्ध नेपालको निर्माणमा सहकारी प्रणालीको कार्यक्रमलाई उच्च महìवका साथ लिएको छ । विश्वव्यापी सहकारी आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट नेपालको गणतान्त्रिक सरकार मानवीय चेतनाको उचाइको समाज विकासको दर्शनलाई आत्मासात गर्ने हैसियतको मान्नु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि सहकारीको उपयोग र व्यवहार विश्वको स्थापित सिद्धान्तको परिधिभित्र नै रहन्छ वा अर्कै हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारी नीति-कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई उच्च महìवको कार्यक्रममा राखिएको कुराले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि गणतान्त्रिक सरकारलाई थप बधाई तथा शुभकामना दिएको हुनुपर्दछ । किनकि राष्ट्र सङ्घ सहकारी आन्दोलनलाई विश्वास गर्दछ । छिमेकी चीन र भारतका सहकारी आन्दोलनका तर्फबाट पनि बधाई र शुभकामना सरकारले प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्दछ किनकि विश्व सहकारी आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा दुबै राष्ट्र रहेका छन् । नेपालको सहकारी आन्दोलनको तर्फबाट पनि सरकारले बधाई र शुभकामना पाएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । सरकारको यो स्तरको चेतना तथा सहकारी आन्दोलनको महìवलाई आत्मसात गरी आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रलाई दिएको उच्च महìवका लागि पङ्क्तिकारको सलाम, बधाई र सफलताको शुभकामना छ ।
Posted by Narthunge at 7:21 AM No comments:
स्वायत्त संघीय प्रणाली हुने
काठमाडौं, भदौ १३ - सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच राज्य पुनःसंरचना गर्दा स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था गर्नेलगायत
२२ बुँदे सम्झौता बिहीबार भएको छ । झन्डै तीन महिनासम्म चलेको वार्ता बिहीबार सहमतिमा टुंगिएको हो ।
फोरमले सञ्चालन गर्दै आएका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । दुवै पक्षले संविधानसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि जनजातिसँगको सहमतिमा केही जाति, भाषा, क्षेत्र, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर संघीय संरचनाको सुझाव दिन विज्ञहरूको समावेशी आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले फोरमसँग स्वायत्ततासहितको संघीय संरचनामा जाने सम्झौता
गरेको छ । स्वायत्तताको अधिकार, प्रकृति र सीमा संविधानसभाले निर्धारण गर्नेछ ।
'सम्झौताबाट मधेसी जनताले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन्,' सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि यादवले भने- '०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्रको दिशामा अघि बढायो भने मधेस आन्दोलनले मुलुकलाई स्वायत्त प्रदेशसहितको संघात्मक संरचनाको आधार खडा गर्‍यो ।' उनले पहिलोपटक राज्यबाट मधेसी जनताले अधिकार प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
'मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंंख्यक समुदायले पहिलोपटक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त हुने भएको छ,' उनले भने- 'यो मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हो ।'
सम्झौतामा सरकारी वार्ता टोली संयोजक शान्ति तथा पुनर्निर्माण- मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री रामचन्द्र यादव र फोरमका सीतानन्दन रायसहितको उपस्थिति थियो ।
'मुलुकको राजनीतिक इतिहास, लोकतन्त्रको विकास र संविधानसभा निर्वाचनका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुनेछ,' पौडेलले शान्ति मन्त्रालयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भने- 'नेपालीबीचको सहअस्तित्व, भाइचारा र सद्भाव अभिवृद्धि गर्नेछ ।'
जेठ १८ मा जनकपुरमा सरकार र फोरमबीच पहिलो वार्ता भएको थियो । वार्तामा फोरम प्रतिनिधिले संविधानसभाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका सबै अंगका समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासहितको मधेस राज्यको माग गरेका थिए ।
उनीहरूले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई थाती राखै बिहीबार सहमतिमा आएका हुन् । फोरमले सम्झौतापत्रमै गणतन्त्रको स्थापना र समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीलाई भने यथावत् राखी चुनावमा जाने छुट्टै एक बुँदा थपेको छ । पौडेलले मूलभूत राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भइसकेकाले अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सशस्त्र समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन प्रेरणा मिल्ने बताए । उनले प्राविधिक समस्याहरू रहे राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका समूहहरूलाई पनि सहमतिमा आउन आग्रह गरे ।
गत माघमा अन्तरिम संविधान घोषणापछि सुरु मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरम र सरकारबीच तीन महिनामा आधा दर्जन औपचारिक र धेरैपटक अनौपचारिक वार्ता भएका थिए । फोरमसँगका केही सम्झौता यसअघि साउन २२ मा जनजाति सँगको सहमतिमा समेत परेको थियो ।
जनकपुरमा भएको पहिलो वार्ताका सहमतिमध्ये मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, घाइते, अन्धा, आपांग भएकालाई राहत तथा उपचार व्यवस्था गर्ने, फोरमका नेता, कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई पुनः राखिएको छ ।
सम्झौतामा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडा वर्ग, अपांग, अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान आदि समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहका साथै शक्ति, साधन र स्रोतमा सन्तुलित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्ने र ती आयोगमा समावेशी ढंगले विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्थासमेत गरिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै मधेसीहरूको वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने, मुस्लिमको मुख्य चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने, मदरसा बोर्डलगायत उनीहरूको जाति, भाषा, लिंग, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज सुरक्ष्ाित गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने, सरकारी कामकाज, शिक्ष्ाा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाको त्रिभाषीय नीति कायम गर्ने सम्झौता भएको छ ।
दलितको समस्या समाधानका लागि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई कडा कानुनी दण्डको व्यवस्था गर्ने, दलितलाई निःशुल्क र कम्तीमा अनिवार्य प्राथमिक शिक्ष्ााको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, शिक्ष्ाा र रोजगारीमा विशेष अवसर र आरक्ष्ाणको व्यवस्था गर्ने तथा भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि भूमिको व्यवस्था गरी वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
Posted by Narthunge at 5:11 AM No comments:
Posted by Narthunge at 6:22 AM No comments:
चुनौतीः संघीयताको नेपाली मोडल
हचुवाको भरमा संघ निर्माण गर्दा देश विखण्डन भएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, स्रोत परिचालन जस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर समुदायका आकाङ्क्षालाई समेट्ने गरी संघ निर्माण गरियो भने नेपालको अखण्डता झन् मजबूत हुनेछ।
सँविधानसभा निर्वाचनबाट चुनिएका ६०१ जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले करिब २३८ वर्षदेखि शासन गर्दै आएको एकात्मक राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्दैछ। त्यतिबेलाका स•साना राज्यलाई आक्रमण गरी एकीकृत गरेका गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहपछिका १३ ढं शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्र त्यसपछि सामान्य नागरिकको हैसियतमा र्झ्नेछन्। सात दलका शीर्ष नेताहरूको भनाइमा, गोर्खा राज्यको साम्राज्य ढल्नेछ र संघीय संरचनामा नयाँ नेपालको आधारशिला खडा हुनेछ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिने गरिएको राजसंस्थालाई बचाउन नसक्ने निश्चित भइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २७ चैतमा एउटा सन्देश जारी गर्दै सबैलाई चुनावमा भाग लिन आह्वान गरे। सन्देशमा उनले भनेका थिए, “परस्पर सद्भाव र एकता कायम राख्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं भयमुक्त वातावरणमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक हकको प्रयोगमा सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण बालिग नागरिकहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।” संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट आफ्नो राजपाट ढल्ने बुझेका राजाबाट यस्तो भनाइ त्यसै आएको होइन। यसका लागि नेपाली राजनीतिले लामो पीडादायी कालखण्ड गुजारेको छ।
राजनीतिक अध्येताहरूको भनाइमा जनतालाई दमन गरेर केन्द्रीकृत राज्यसत्ता लामो समय टिकिरहन सक्दैन, अलिकति मौका पाउनासाथ जनताले स्वतन्त्रताको आन्दोलन अगाडि बढाउँछन् र निरङ्कुशता ढल्छ। माढवादी सशस्त्र विद्रोहले कमजोर पारेको राजतन्त्रको बचेखुचेको शक्ति पनि जनआन्दोलन २०६२•०६३ ले खोस्यो। विश्लेषक पीताम्बर शर्माका अनुसार, २३८ वर्षको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा उपेक्षित क्षेत्र, प्रदेश र जातिहरू उत्पीडित रहे। तर शाह र राणाहरूको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई आफ्नो वर्गीय र जातीय स्वार्थका कारण २०४६ पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि तोड्न आवश्यक देखेनन्। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पनि एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्‍यो भने दलित, मधेशी, जनजाति, महिलालाई पछाडि धकेल्यो।
केन्द्रीकृत संरचनाले परिवर्तन र विकासलाई पनि अवरुद्ध पार्‍यो र युवाहरूले विदेश पलायनको विकल्प देखेनन्। विदेशिने अदक्ष कामदारहरूमा बहिष्कृत समुदायका बढी देखिनु त्यसैको परिणति थियो। विभेदपूर्ण व्यवहारले बहिष्कृत समुदायहरू गरिबीको रेखामुनि भासिँदै गएका र सत्ताधारी समुदाय आर्थिक रूपले मोटाउँदै गएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन्।
विश्व ब्याङ्कले सन् २००५ मा गरेको अध्ययन (नेपाल पोवर्टी ऐसेस्मेन्टः ब्याकग्राउण्ड पेपर) अनुसार, सन् १९९५/९६ मा सयमा ४८ जना रहेका गरिब पहाडे जनजातिमध्ये सन् २००३/०४ मा ४४ जना पुरानै अवस्थामा थिए। सयमा ५८ जना गरिब दलित पनि ४६ मा मात्र झ्रेका थिए। मुस्लिम समुदायका ४४ जना गरिबमध्ये ४१ जनाको स्थितिमा परिवर्तन आएको थिएन। तर पहाड र तराईका उच्च जातका प्रतिसय ३४ जना गरिबको सङ्ख्या आठ वर्षपछि १८ जनामा झ्रेको देखिएको थियो। यो तथ्याङ्कले जनजातिमा १० प्रतिशत, दलितमा २१ प्रतिशत, मुसलमानमा ६ प्रतिशत र उच्च जातिमा ४६ प्रतिशतले गरिबी घटेको देखाउँछ। जनजाति आन्दोलनका अध्येता प्रा. बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्, “हाम्रो राज्यसत्ता बाहुन क्षेत्री प्रधान, हिन्दूधर्म केन्द्रित, नेपाली भाषी र पर्वते पुरुषहरूको कब्जामा रहेकोले जातीय रूपमै यस्तोे असमानता देखिएको हो।”
यस्तो विभेद भोगेको बहिष्कृत समुदायले २०४६ को परिवर्तनपछि आफ्नो असन्तुष्टि उठाउन थाले पनि ठूलो दबाब सृजना गर्न सकेको थिएन। र, सत्ताधारी प्रमुख दलहरूलाई पनि संघीय तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता आकर्षक नाराले छुनसकेको थिएन। तर त्यही मुद्दालाई समातेर २०५२ मा माढवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेपछि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू पन्छाउनै नसक्ने गरी सतहमा देखापरे। जनआन्दोलन २०६२•६३ ले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो भने जनजाति र मधेश आन्दोलनले संस्थागत गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे। मधेश र जनजाति आन्दोलनको क्रममा गोली खान समेत नहच्कने युवाहरू सडकमा निस्कन थालेपछि दलहरूले संघीयतामा नगई धरै पाएनन्।
कम छैन चुनौती संघीय व्यवस्थाका जन्मदाता जोहान्स अल्थुसियस (सन् १६०३) लाई मानिए तापनि यो संरचनामा विश्वका देशहरू जान थालेको १८ढ शताब्दीदेखि हो। २०ढ शताब्दी संघीय व्यवस्थाको लागि उर्वर मानिन्छ। हाल विश्व जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत बस्ने २८ वटा मुलुक संघीय छन् वा हुने क्रममा छन्। यसबाट संघीय व्यवस्थाको प्रचलन बढ्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ। ठूलो क्षेत्र र धेरै जनसङ्ख्या भएका प्रायः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले संघीय व्यवस्था अँगालेका छन्। पछिल्लो समय विश्वभर पहिचानको राजनीतिले प्रमुखता पाउन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यसअनुरुप आफूलाई परिमार्जन गरी नयाँ अवधारणाहरू ल्याउन थालेको छ। विश्वमा पछिल्लो समय चलेको राज्य•राष्ट्र (स्टेट•नेशन) को अवधारणालाई राष्ट्रसंघले मान्यता दिनु त्यसको दृष्टान्त हो।
कुनै सीमारेखाभित्र बाँडिएका सम्पूर्ण जातिहरूलाई नै राष्ट्र मान्ने यो अवधारणा अनुरुप बहुराष्ट्रिय ' विविधता ' भएका देशमा ती जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार हुन्छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक र आदिवासीहरूको पृथक्•पृथक् पहिचान शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोगात्मक रूपमा एउटै राज्यभित्र अटाउन सक्छन् भन्ने यो अवधारणाले लोकतान्त्रिक रूपमा द्वन्द्व समाधान हुने र पहिचानको राजनीतिलाई पनि सम्बोधन गर्ने हुँदा पछिल्लो समय चल्तीमा छ।
संघीयता एक परिचय पुस्तकमा जर्ज एन्डरसनले लेखेका छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारको विकास, पहिचानको राजनीतिको वृद्धि, पहिलेका सार्वभौम मुलुकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने नयाँ प्रयोग र द्वन्द्वपछि स्थिर सरकार बनाउने उपायहरूको खोजीका कारण संघीयताप्रति आकर्षण बढेको हो।” उनका अनुसार, कानूनी शासन र न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने समाजमा संघीय प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्छ।
तर विविधतायुक्त समाजमा यसका लागि सहिष्णुता र समझ्दारीको संस्कृति अत्यावश्यक हुन्छर त्यसमा दलका नेताहरूको प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ। नेताहरू असहिष्णु भए जातीय नेता मिलोसेभिकले युगोलास्भिया टुत्र््कयाए जस्तो विखण्डनको डर हुन्छ भने सहिष्णु राजनीतिज्ञ भए गान्धी र नेहरूले भारतमा अनि नेल्सन मण्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो साझ्ा राष्ट्रियताको भावना विकास गरी बहुराष्ट्रिय देशलाई अखण्ड बनाउन सकिन्छ। संघीय व्यवस्था सफल मानिएको भारत, नाइजेरिया, क्यानडा, स्वीटजरल्याण्ड, इथिढपिया, दक्षिण अफ्रिका यसका उदाहरण हुन्।
नेपाल जस्तो लामो द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहेका देशहरूले गृहयुद्ध भोग्नुपरेको उदाहरण पनि छ। अमेरिका, पाकिस्तान, क्यानडाको क्यूबेक र नाइजेरियामा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि लामो गृहयुद्ध चलेको थियो। मेक्सिको, अर्जेन्टिना र ब्राजिलका द्वन्द्वलगायत स्पेनको बस्क्यूमा भएको विद्रोहले समाजमा गहिरो विभाजन ल्यायो। यी देशमा भएका पृथकतावादी आन्दोलनको कतै उचित सम्बोधन र कतै दमनपछि मात्र द्वन्द्व समाप्त भएका छन्।
भोलि त्यस्तो परिस्थति सृजना हुनसक्ने कारणहरू यहाँ पनि विद्यमान छन्। सुडान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, बोस्निया•हर्जगोभिनाले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गर्न खोजे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताका कारण ती देशहरू द्वन्द्व र विखण्डनको सँघारमा पुगेका हुन्। त्यसैले नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त देशले संघमा जाँदा द्वन्द्व र विखण्डन नआढस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ। आदिवासी जनजाति महासंघका सल्लाहकार डा. कृष्ण भट्टचन भन्छन्, “राजसंस्थाले जनजाति, मधेशी र दलितलाई बहिष्करणमा राखेकोले नै ती समुदाय राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्। दलहरूले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याए भने तिनको त्यही हविगत हुने निश्चित छ।”
जताततै छ गरिबी
विकास क्षेत्र/ गरिबीको प्रतिशत
१ देखि माथि
नेपालमा अझ्ै ३१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लामा ३१ प्रतिशत भन्दा धेरै तथा झ्ण्डै ५० प्रतिशत जिल्लामा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबी छ।
स्रोतः नेपालमा संघीय शासन प्रणालीः चुनौती र अवसरहरू पुस्तकबाटसन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा १०० जातजाति, ९२ भाषाभाषी, चार नश्ल र आठ धर्मावलम्बी रहेको देखाएको छ। नेपाल कुनै पनि जाति बहुमतमा नभएको अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो। १८ वटा जाति कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा छन्। १९ वटा जातिको जनसङ्ख्या ५ हजार भन्दा कम छ। माढवादी र विभिन्न समुदायले प्रस्ताव गरेका जातीय राज्यहरूमा ती जाति नै अल्पमतमा पर्छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने शासक जातिको रूपमा रहेको क्षेत्री बहुमतमा देखिन्छ। क्षेत्री नौ वटा र मगर, थारू, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक•एक जिल्लामा बहुमतमा छन्। त्यसैगरी कुनै जातिको बहुमत केही गाविस/नपामा मात्र छ। क्षेत्री ३८७, मगर १७५, तामाङ १५९, थारू १०६ र बाहुन १०२ गाविसमा बहुमतमा देखिन्छन्(हे. तालिका, अघिल्लो पानामा)।
कतिपय आलोचक र समुदायका अगुवाहरूले सरकारी जनगणनालाई मिथ्याङ्क भने तापनि जातजातिगत अवस्थाको विश्लेषण गर्ने अर्को तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। त्यसैले पुनः जनगणनाको माग हुन सक्ने भएकोले राज्य पुनर्संरचना आयोगका लागि पनि यसले केही अप्ठेरो पार्न सक्छ। मधेश आन्दोलनताका यस्तो माग उठिसकेको हुनाले मुख्य दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएर तयारी गर्न आवश्यक छ।
२२ साउन ०६४ मा आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग गोदावरीबाट सम्झ्ौता गर्न शुरु गरेको सरकारले त्यसयता विभिन्न क्षेत्र र समुदायसँग सम्झ्ौता गरी संविधानसभाले सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको छ। संविधानसभामा जातीय र क्षेत्रीय दलका धेरै प्रतिनिधि जान नसके पनि विभिन्न दलबाट यसपालि उनीहरूको राम्रो उपस्थिति हुनेछ। दलका प्रतिनिधि भएपनि संविधानसभामा समुदायका आवाज उठाउन उनीहरूमाथि दबाब बढ्नेछ। त्यसैले दलका प्रतिनिधिहरू पनि संविधानसभामा समुदायका मुद्दा बोकेर छिर्नेछन्।
जनजाति महासंघले जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्न संविधानसभामा गएको बताएको छ। मधेशी दलहरूले संविधानसभाबाट स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउने र त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने बताउन छाडेका छैनन्। लिम्बू, राई, थारूजस्ता जातीय गणराज्यका लागि चुनावको मुखसम्म आन्दोलन गरिरहेका समूहहरूले संविधानसभाबाट गणराज्य सुनिश्चित नभए विद्रोहमा जाने बताएका छन्। त्यसमाथि माढवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा जातीय र स्वायत्त प्रदेशको आधारमा देशलाई संघीयतामा पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर तथा त्यसअनुसार नभए विभिन्न मोर्चाहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने बताएर भोलिको अवस्थाको पूर्वसङ्केत गरेको छ। यसले गर्दा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय संघीयता हुने देखिन्छ।
परशुराम तामाङको अध्यक्षतामा चुनावमा भाग लिएको राष्ट्रिय ताम्सालिड दल नेपालले जातीय रूपमा देशलाई पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र ती स्वायत्त राज्यको शासनसत्तामा त्यहीँका आदिवासीहरूको अग्राधिकार रहने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ। यस्तो मान्यता पछ्याउने र त्यसका लागि वकालत गर्ने अरू समुदाय पनि छन्। यो अवधारणा अनुसार मगरातमा मगर र लिम्बुवानमा लिम्बूले बाहेक अरूले प्रमुख पदमा जाने हैसियत राख्दैनन्,अर्थात् आदिवासीहरूलाई नै आ•आफ्ना क्षेत्रमा शासन गर्न पाउने अग्राधिकार हुनेछ। यसरी माढवादीलगायत विभिन्न दल र समुदाय आ•आफ्नै किसिमले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेर बसेका छन्। संविधानसभामा तिनको आग्रहले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।
माढवादीले २५ पुस २०६० मा रोल्पामा मगरात स्वायत्त प्रदेशको घोषणा गरेर शुरु गरेको जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरूको नक्साङ्कनले बढाएको समुदायका आकाङ्क्षा संविधानसभामा प्रस्फुटन हुने पक्का छ। माढवादीले पनि ती समुदायलाई आकर्षित गर्न यस्तो मुद्दामा सम्झौता गर्ने सम्भावना कम छ। मतको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माढवादीले उसको आधार मानिएको समुदायका मुद्दा छाड्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दारहेछ भन्ने बालाजु प्लेनममा आत्मसात गरिसकेकोले पनि उसले चर्का विवादास्पद मुद्दामा खेल्ने सम्भावना ज्यादा छ। देशमा बढ्दै गएको जातीय राजनीतिको ताप र भविष्यमा आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्न समुदायगत मतले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने निर्क्यालका आधारमा प्रमुख दलहरू पनि यो दौडमा पछि पर्ने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा संघीय राज्यको स्वरुप वैज्ञानिक र टिकाउ नभई आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बन्यो भने द्वन्द्व झ्न् बढ्नेछ र एक जुगमा आएको संविधानसभाको ढचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसतर्फ दलहरू अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ। डा. भट्टचन भन्छन्, “यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धित समुदायलाई नै दिइनुपर्छ, केन्द्रबाट लादियो भने त्यसले द्वन्द्व बढाउन सक्छ। तर संघहरू स्वायत्त र लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ।” उनको भनाइमा विश्वमा स्वायत्तता नदिइँदा जातीय युद्धहरू बढिरहेका छन् र त्यसले विखण्डनलाई बढाइरहेको छ, तर संघलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने हो भने ती झ्न् बलिया हुन्छन्। उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, “डेनमार्कको स्वायत्त प्रदेश ग्रीनल्याण्डलाई डेनमार्कले छुट्टिएर जा भन्दा पनि ऊ जाँदैन। किनकि उसले डेनमार्कको छातामा बसेर धेरै आर्थिक फाइदा उठाइरहेको छ र छुट्टिनासाथ ती सुविधा गुम्छन्। ग्रीनल्याण्डको प्रतिव्यक्ति आय युरोपियन युनियन राष्ट्रहरूको समकक्ष छ।”
सबैका आ•आफ्नै प्रस्ताव
आम्दानी आन्तरिक स्रोत
प्रशासनिक खर्च (%)
आ.व. २०५९/६० को जिविसहरूको आम्दानी र खर्चको आधारमा (रु.हजारमा)
स्रोतः जिविस र गाविसको वित्तीय स्थिति विश्लेषण, २०६१विज्ञहरूको भनाइमा संघीय राज्य टिक्न ती प्रदेश आर्थिक रूपले सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म प्रस्ताव गरिएका संघीय राज्यमा यो कुरालाई महत्व नदिइएको मात्र हैन, रेखाङ्कन गरिएका कतिपय क्षेत्र नै जातजातिबीच वैमनष्यता खडा गर्ने खालका छन्
मधेशका केही उच्च जातिको नेतृत्वमा खुलेका दलहरूले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त एक मधेश प्रदेशविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी थारू खुलेर लागेका छन्। तराईको कुल जनसङ्ख्याको ११ प्रतिशत र मधेशी जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत ढगट्ने थारूको असन्तुष्टिले सानो अर्थ राख्दैन। त्यसैगरी तराईका मेचे, कोचे आदिवासी पनि कोच स्वायत्त प्रदेश माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तराईमा नेपालको जनसङ्ख्याको ४.३ प्रतिशत ढगट्ने मुस्लिम छन्। पहाडका विभिन्न जिल्लामा समेत बसोबास गर्ने यो समुदाय स्वायत्त मधेशभन्दा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। मधेशमा बस्दै आएका पहाडेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई पनि मधेशी आन्दोलनकारीले अझ्ैसम्म विश्वासमा लिनसकेका छैनन्। बरु उल्टै मधेश आन्दोलनकारीले देखाएको असहिष्णु व्यवहारका कारण पहाडेहरूले चुरेभावर एकता समाजको नाममा अर्काे समूह खडा गरेका छन्, जसले मधेशी र पहाडे बीचको सहिष्णुतालाई झ्न् बढी खलल पुर्‍याएको ठानिन्छ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार तराईमा हिन्दू धार्मिक समूहभित्र पनि ११ दलित समूहसहित ४३ वटा फरक•फरक जात छन्। यी समूहहरू मैथली, भोजपुरी, अवधी र बाजिका गरी चार अलग•अलग समूहमा बाँडिएका छन्। यस्तो मिश्रित संस्कृतिलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुनै पूर्व तयारी बिना स्वायत्त मधेशको अवधारणा आएको देखिन्छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको झ्ापा र सुनसरी जिल्लालाई लिम्बू आन्दोलनकारीहरूले लिम्बुवान प्रदेशभित्र समेटेका छन्। लिम्बुवान राज्यका लागि लडिरहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा लिम्बुवानलाई मधेश भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्छन्, “हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि हामी मरिगए छाड्दैनौँ।”
जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि उपयुक्त र लिम्बुको सघन बसोबास भनिएको प्रस्तावित लिम्बुवान प्रदेशको सीमाङ्कन पनि भद्रगोल छ। लिम्बुवान भनिएको संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा उनीहरू भन्दा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ। उनीहरूले अहिलेसम्मका शासक भन्दै आएको बाहुन क्षेत्री सबैभन्दा बढी (२६.७ प्रतिशत) देखिन्छन्। त्यसपछि लिम्बु (२३.५ प्रतिशत) र राई (१६.३ प्रतिशत) छन्। लिम्बुवानमा बस्ने ४५.२ प्रतिशतको मातृभाषाको रूपमा नेपाली बोल्छन् भने २२.५ प्रतिशतले मात्र लिम्बु भाषा बोल्छन्। राई भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या १५.८ प्रतिशत छ। समाज अध्येता डा. डिल्लीराम दाहाल ' राष्ट्र पुनर्निर्माणः सामाजिक•सांस्कृतिक परिदृश्य ' कार्यपत्रमा प्रश्न गर्छन्, “अन्य समूहको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको परम्परागत लिम्बुवान क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा कसरी रेखाङ्कन गर्ने?”
विभिन्न समुदाय र माढवादीले गरेका स्वायत्त प्रदेशको सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्ययनको आधार हुने भएकाले त्यसलाई लिएर संविधानसभामा हानथापको स्थिति सृजना हुनसक्छ। एकातर्फ पहिचान (जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति)को आधारमा संघीय ईकाई बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातर्फ यसोगर्दा अर्को जातिको आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भनेर हेर्नुपर्ने पनि जरुरी छ।
माढवादीले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त प्रदेश कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुनाले तिनमा केन्द्रीयता हावी हुने खतरा पनि छ। अति केन्द्रीयताले गर्दा परम्परागत कम्युनिष्ट शासन भएको मुलुकका संघीय व्यवस्था टिकेका छैनन्। पूर्व सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया त्यसका दृष्टान्त हुन्। लोकतन्त्र नभएका अति केन्द्रीकृत र सैनिक शासन भएका देशमा पनि संघीय व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्दैन। ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी कतिपय समुदायले उठाएका अग्राधिकारका कुरा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छन्। पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “बाहुन क्षेत्रीको उत्पीडनबाट मुक्त भएर कुनै अमूक जातिको तानाशाहीभित्र बस्नुपर्छ भन्नु सामन्ती सोच हो। त्यसले फेरि घुमाइफिराइ सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्छ।”
आफ्नै धरातल विश्वका संघीय संरचनाहरू त्यस देशको बहुलता, भूगोल, आर्थिक र राजनीतिक आधारलाई समातेर बनेका छन्। भारतमा पनि जाति र भाषाको आधारमा छुट्याउँदा विखण्डन हुन्छ भन्ने डरले शुरुमा त्यसो गरिएन। तर सन् १९५६ र सन् १९६६ को बीचमा सीमाङ्कन गर्दा धार्मिक आधारमा पन्जाब प्रदेशको निर्माण गरियो र भाषिक आन्दोलन चर्किएपछि भाषिक रूपमा केही संघको पुनर्संरचना गरियो। नाइजेरियाका ३६ राज्यलाई प्रमुख जाति, भाषा र धार्मिक आधारमा छुट्याइएको छ।
स्वीटजरल्यण्डमा मुख्य तीन भाषा, दुई धर्म र एउटा क्षेत्रसहित २० वटा पूर्ण र ६ वटा अर्ध क्यान्टोनमा बाँडिएको छ। इथिढपियामा नयाँ संघ पूर्ण जातीय आधारमा बनाइएको छ भने केही संघ बहुलतायुक्त छ। संघीय संरचनाको आकार देशको वस्तुगत आधारमा बनेका छन्। १६ करोड जनसङ्ख्या बस्ने भारतको उत्तरप्रदेश जस्ता संघ पनि छन् भने १२ हजार जनसङ्ख्या रहेको नेभिस जस्ता संघ पनि बनेका छन्। रूस जस्तो ठूलो संघमा पनि १४ हजार जनसङ्ख्या भएको इभेन्की जस्तो स्वायत्त प्रदेश छ।
संघको संरचना निर्माण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन र प्रदेशबीच आर्थिक अन्तरसम्बन्ध कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुनाले संघ निर्माण गर्दा भावना भन्दा तथ्य•तथ्याङ्कको बढी ख्याल गरिनुपर्दछ। नेपालमा अन्य देशमा जस्तो उपनिवेशबाट मुक्त भएर एकीकृत संघ बनाउने नभई केन्द्रीकृत सत्तालाई आन्तरिक रूपले खण्डित गर्नुपर्ने भएकोले संघीय संरचना तयार पार्न सजिलो छैन।
समाज अध्येताहरूको विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो नेपालका ७५ वटै जिल्ला एकअर्कामा यति निर्भर छन्, ती एक्लाएक्लै टिक्नै सक्दैनन्। यहाँ धनी जिल्लाबाट उठ्ने राजस्वको बाँडफाँडले गरिब जिल्लाको पनि प्रशासनिक खर्च चलिरहेको छ। स्व. डा. हर्क गुरुङले गरेको एक अध्ययन अनुसार, आफ्नै राजस्व र प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने ११ वटा मात्र जिल्ला छन् भने ६४ वटा जिल्ला वित्तीय रूपले घाटामा छन् (हे. तालिका)। केन्द्रबाट दिइने खर्चले ती जिल्ला चलेका छन्।
संघीय शासन अँगालेका विभिन्न देशको आर्थिक व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै अर्थविद् डा. शंकर शर्मा लेख्छन्, “जस्तो र जत्रोसुकै संघ बनाइए पनि वित्तीय स्रोत र अधिकारको बाँडफाँडलाई ध्यान दिँदै गरिबीको स्थिति, विभिन्न निकायको कर संकलन गर्न सक्ने क्षमता, प्रभावकारिता र संघहरूको कार्य विभाजन, जनतालाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा र यसको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ।”
तराई विना पहाड बाँच्दैन पहाड विना तराई चल्दैन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशत हिस्सा ढगट्ने तथा ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि आश्रित कृषिलाई नेपालको प्रमुख आर्थिक आधार मानिन्छ। कृषियोग्य जमिनको ५६ प्रतिशत तराईमा रहेकोले आर्थिक आधार तराईमै देखिन्छ। प्रमुख भन्सार र उद्योग कलकारखाना पनि तराईमै छन्। त्यसैले स्वायत्त एक मधेश प्रदेशका पक्षधरहरू तराई आर्थिक रूपले सक्षम हुने दाबी गर्छन्। तर उनीहरूले ध्यान नदिएका र उपेक्षा गर्न नमिल्ने अन्य बलिया पक्ष पनि छन्।
तराईसँग जोडिएको भारतमा हरितक्रान्ति सफल भएकोले कृषि उत्पादन राम्रो छ। सरकारले कृषि सामग्रीमा दिएको सहुलियतले त्यहाँको कृषि उत्पादन नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो छ। साथै बजार र अवसर पनि नेपालको भन्दा ठूलो छ। भारतीय उद्योगधन्दाबाट उत्पादित सामग्रीको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले अहिले नै नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। तराईले आफ्नो उत्पादनको बजार पहाड र हिमालमा नखोजी सुखै छैन, जुन अहिले पनि मुख्य बजार नै छ। डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले तराईले पहाडको आश्रय नलिई धर छैन।” उनको भनाइमा बलियो संघ बनाउन पहाड र तराई नजोडिई हँदैन।
पहाड र हिमालमा जलश्रोत, पर्यटन, पर्वतारोहण र जडीबुटीको अपार खानी छ, जुन राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको छैन। हिमाल हुँदै पहाडबाट बग्ने पानी र त्यसबाट निस्कने विद्युत्बाट तराईले फाइदा नलिई हुँदैन। कृषि र उद्योगको विकास पानीबिना कल्पना गर्न नसकिने हुनाले तराई र पहाडको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनै पर्दछ। पहाड र हिमालमा पर्यटन र जडीबुटीबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न र तराईमा कृषि र उद्योगबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने हुनाले संघ बनाउँदा यी कुराहरूलाई ध्यान दिइनुपर्ने शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कुनै आग्रह•पूर्वाग्रह नराखी आर्थिक रूपले सबल र सक्षम संघ कसरी बनाउने भनेर सोच्ने हो भने संघीय संरचना बनाउन गाह्रो छैन।”
अल्पसङ्ख्यकहरूको देशः एकल जातीय राज्य बनाउने बहुमत कसैसँग छैन
बाहुल्य जिल्लाः २१बहुमत जिल्लाः ९बाहुल्य गाविसः ९२८बहुमत गाविसः ३८७
बाहुल्य जिल्लाः १०बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः ४९२बहुमत गाविसः १०२
बाहुल्य जिल्लाः ७बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३६२बहुमत गाविसः १७५
बाहुल्य जिल्लाः ४बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३१०बहुमत गाविसः १०६
बाहुल्य जिल्लाः ५बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः २७८बहुमत गाविसः ३६
बाहुल्य जिल्लाः ५बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः ३०८बहुमत गाविसः ३८
बाहुल्य जिल्लाः ६बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः १८०बहुमत गाविसः ७६
बाहुल्य जिल्लाः ४बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः १३०बहुमत गाविसः ७७
बाहुल्य जिल्लाः ७बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ३०१बहुमत गाविसः १५९
बाहुल्य जिल्लाः ३बहुमत जिल्लाः १बाहुल्य गाविसः ८४बहुमत गाविसः २९
बाहुल्य जिल्लाः ३बहुमत जिल्लाः -बाहुल्य गाविसः १२१बहुमत गाविसः ४४
-५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बहुमत मानिएको छ ।)
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना-२००१
Posted by Narthunge at 6:20 AM No comments:
Posted by Narthunge at 6:19 AM No comments:
कस्तो संघ ?
बहुलतामा आधारित नेपाली समाजले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउन थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू अन्तरिम संविधानमै नेपालको भावी राज्य संरचना संघीय हुने कुरा उल्लेख गर्न वाध्य भएका थिए। अब संविधानसभामा कस्तो संघको प्रस्ताव लिएर जाँदैछन् त दलहरू?
२०६२•६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली समाजका विभिन्न घटकले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको आवाज उठाउन थालेपछि प्रायः सबैजसो दलले संघीयताको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। भलै अधिकांश दलले मुलुकलाई कतिवटा र कस्तो संघमा रुपान्तरण गर्ने भनेर किटान नगरे पनि आ•आफ्नो मान्यता अनुसार केही खाका भने प्रस्तुत गरेका छन्।
मुलुकको एकता कायम राख्न प्रायः सबै दल एकात्मक राज्य संरचना बदलेर संघीय बनाउन सहमत भएपनि कसैकसैमा यसले मुलुकलाई विखण्डित गर्ने पो हो कि भन्ने भयले बास गरेको पाइन्छ। वामपन्थी घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणापत्रमा अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित संघीयतामा जाने कुराको कडा प्रतिवाद गर्दै भनेको छ, “देशलाई टुक्र्याउने प्रकारको आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।”
तर जनमोर्चाको विचारसँग सहमत छैनन् राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध गौतम। उनी भन्छन्, “हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता भनेको पुनः एकीकरणको प्रक्रिया हो। यसलाई टुट्ने र फुट्ने रूपमा नभई जुट्ने रूपमा लिनुपर्छ।” ' विखण्डन ' भन्ने शब्दलाई मनमस्तिष्कमा बोकेर उकुसमुकुस हुँदै संविधानसभाभित्र प्रवेश गर्दा नेपालमा अहिले उठिरहेको पहिचानसहितको मान्यता, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र समानताका सवाललाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन। विश्लेषक गौतमका अनुसार पहिचानसहित प्रतिनिधित्व र समानताको मुद्दा यतिखेर संघीयतामा गएर ठोक्किएका छन्।
क्षेत्रीय दलका खाका
तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ। हामी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छैनौं। एउटा केन्द्र भत्काएर तराईमा फेरि अर्को केन्द्र बनाउन हामी चाहँदैनौं।विष्णु रिमाल केन्द्रीय सदस्य नेकपा (एमाले)तराईका क्षेत्रीय दलहरू तराई•मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), मधेशी जनअधिकार फोरम (मजफो), सद्भावना (महतो) र सद्भावना (आनन्दीदेवी) सबै ' एक मधेश•एक प्रदेश ' को पक्षमा उभिएका छन् भने रामराजाप्रसाद सिंहको नव जनवादी मोर्चा नेपालले चाहिँ नेकपा (माढवादी)को संघीयतासँग मिल्दोजुल्दो प्रस्ताव अघि सार्दै खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवार, खसान, थरुहट, तराई, कोचिला जस्ता संघीय राज्यहरू बनाउनुपर्छ भनेको छ।
उता मजफोका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फोरमले जातीय राज्यको सोच नराखेको स्पष्ट गर्दै आफू मधेशलाई कोचिला, मिथिला, थारूवान, थरुहट, भोजपुरा, अवध जस्ता टुक्रा गर्ने पक्षमा नभएको बताउँछन्। सद्भावना (महतो) का महासचिव अनिल झा हिमाल, पहाड र मधेश गरी देशलाई तीन वटा प्रदेश बनाउने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुरको तमलोपा पनि पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व झापासम्म एक स्वायत्त क्षेत्रको पक्षमा छ।
संघको स्वरुपका सम्बन्धमा मतभेद भएपनि रामराजाप्रसाद सिंह र उपेन्द्र यादवका दलको राज्य र सरकारको स्वरुप भने एउटै छ― राष्ट्रपतीय पद्धति। संघको वनावटमा फोरमसँग निकट तमलोपा र दुवै सद्भावनाले सरकारको स्वरुपका सम्बन्धमा चाहिँ चुरे•भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल चाहिँ तराईमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको आधारमा प्रदेश निर्माण गरिनु उचित हुने विचार व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छैनौँ। एउटा केन्द्र भत्काएर तराईमा फेरि अर्को केन्द्र बनाउन हामी चाहँदैनौँ।”
कति वटा प्रदेश बनाउने भन्ने बारेमा विज्ञहरूको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुन्छर त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि संविधानसभामा बहस र छलफल गरेर मात्र प्रदेशहरूबारे टुङ्गो लगाइनेछ।प्रकाशशरण महत केन्द्रीय सदस्य, नेकाअहिले जुन जुन नाम, रुप र अवतारमा आएपनि पूर्व पञ्चहरूको झुकाव दरबारतिरै छ। शाहीकालका गृहमन्त्री कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संवैधानिक राजन्त्रलाई आत्मसात गर्दै संघीयताका सम्बन्धमा अस्पष्ट कुरा गरेको छ। थापाले राष्ट्र विखण्डनको बीजारोपण भएकोले यसबाट मुलुकलाई एकताबद्ध बनाइराख्न राजतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने गरेपनि उनको दलले जातीय, भौगोलिक एवं आर्थिक संभाव्यताको आधारमा स्वायत्त संघीय राज्य प्रणाली अपनाउन प्रस्ताव गरेको छ। १५ वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलन गर्दा सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा रहेका कमल थापाहरू अहिले बल्ल त्यतिबेलाको सोच लिएर जनतामाझ् पुगेका छन्।
सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको चाहिँ प्राकृतिक र भौगोलिक वनावट, जातीय•भाषिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलता तथा आर्थिक साधन, स्रोत र प्रशासनिक स्थितिका आधारमा संघीय स्वायत्त राज्यहरू बनाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव छ। पशुपति शमशेरको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रस्ताव गरेको प्रान्त पनि भूगोल, जनसङ्ख्या, जातीय समुदाय, भाषा, सांस्कृतिक पहिचान, प्राकृतिक स्रोत•साधन र आर्थिक संभाव्यताको आधारमा बन्नेछ।
अन्य दलको अवधारणा क्युवाको जस्तो शासनपद्धतिको वकालत गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले चौध अञ्चलको पुरानै अवधारणालाई प्रान्तमा बदल्नु उचित ठहरिने जिकिर गरेको छ। जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा संघहरूको निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्दै नेमकिपाकी विधायक लीला न्याइच्याइँ भन्छिन्, “त्यसो गर्दा संघीयतामा अभ्यस्त भई नसकेका हामी अलमलमा पर्न र थुप्रै विवादहरू जन्मन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले हिमाल, पहाड र तराई सबै भू•भागलाई समेट्ने गरी रेखाङ्कन गरिएको चौध अञ्चलको अवधारणालाई नै अपनाउनु उचित हुनेछ।”
जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा संघहरूको निर्माण गर्दा अलमलमा पर्ने र विवादहरू जन्मने खतरा हुन्छ। हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्ने गरी चौध अञ्चलको अवधारणा नै अपनाउनुपर्छ।लीला न्याइच्याइँ विधायक, नेमकिपानेकपा (माले)को जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताको आधारमा नेपाललाई पाँच•सात वटा केन्द्र शासित प्रदेशमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर नेकपा (संयुक्त) वर्ग, जात र वंशको आधारमा प्रान्त बनाउने कुराको विरोधमा उभिएको छ। उसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, “जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सुगमता, आर्थिक संभाव्यता र जनसङ्ख्याको बनोटका आधारमा प्रान्तहरू बनाइनुपर्छ।” जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ चाहिँ जाति, भाषा र क्षेत्रलाई नै संघ निर्माणको बलियो आधार ठान्छन्।
संघीयताका चुनौती नेकपा (माढवादी)ले जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको संघात्मक ढाँचामा मुलुकको रुपान्तरण चाहेको छ। “नेपालमा संघीय संरचनाको आधारबारे थुप्रै बहस हुँदै आएको भएपनि सापेक्ष रूपले बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधार जातीय र क्षेत्रीय पहिचान नै हो भन्ने माढवादीको ठहर छ”, उसको चुनाव प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैले उसले क्षेत्रीयताको आधारमा सेती•महाकाली र भेरी•कर्णाली राज्यको प्रस्ताव अघि सारेको छ भने जातीय राज्यको रूपमा मगरात, थारूवान, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किरात, लिम्बुवान, कोचिला र मधेशलाई विकसित गर्न चाहेको छ। मधेशभित्र पनि भाषाको आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध तीन उप•राज्य बनाउनुपर्ने माढवादीको धारणा छ। उसले अघि सारेको राज्य पुनर्संरचनाको यो प्रस्ताव र जनमोर्चा (अमिक)को प्रस्ताव उस्तै रहेको पाइन्छ।
भाषा, भौगोलिक विविधता र जातीय सन्तुलनका आधारमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि हिमाल, पहाड र तराई तीन वटा प्रदेश बनाउनु उचित छ।अनिल झा महासचिव, सद्भावना (महतो)तर, एमाले र काङ्ग्रेसले अहिले नै माढवादीले झै प्रदेश, प्रान्त वा राज्य विभाजन गरेका छैनन्। उनीहरूले भौगोलिक अनुकूलता र अवस्थिति, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक संभाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता र राजनीतिक/प्रशासनिक संभाव्यता समेतलाई आधार बनाएर प्रदेश निर्माण गर्न सकिने खाका प्रस्तुत गरेका छन्। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतका शब्दमा, “अहिले नै यतिवटा प्रान्त बनायौँ भन्नु परिपक्व ठहर्दैन। यसको लागि विज्ञहरूको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुनेछ। र, उसको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि संविधानसभामा बहस र छलफल गरेर मात्र प्रदेशहरूबारे टुङ्गो लगाइनेछ।” महतको यस भनाइसँग एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल पनि सहमत छन्।
माढवादीको राज्य सञ्चालन परिपाटी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा आधारित हुनेछ भने एमाले र काङ्ग्रेसको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा। माढवादी, काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्ना मोडेलहरूले पहिचान, प्रतिनिधित्व र समानताको मुद्दालाई हल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। र, गणतन्त्र घोषणापछि संविधानसभाको प्रमुख चुनौती संघीयताको छिनोफानो गर्नु नै हुनेछ।
एकात्मक राज्य संरचनालाई परिवर्तन गर्न नेपाली समाजले संघीयता चाहेको हो। संघमा जाने भनेपछि त्यहाँ धेरै रोजाइहरू आउँछन्। तिनै रोजाइका बीचमा सम्झौता पनि हुन्छ। कुनै संघ क्षेत्रीयताको आधारमा बन्न सक्छन् त कुनै सांस्कृतिक र आर्थिक अन्तर•सम्बन्धका आधारमा। हाम्रो जस्तो बहुलता भएको समाजमा एकै प्रकारको संघ बन्न नसक्ने धारणा राख्दै विश्लेषक अनिरुद्ध गौतम भन्छन्, “जसरी मानिसहरू फरक•फरक अनुहारका हुन्छन्, प्रदेशहरू पनि त्यसरी नै फरक•फरक बन्नेछन्।”